खेल समाचार हेडलाइन्स ग्लोबल लेख WebSite.WS | Gvmg - ग्लोबल भाइरल मार्केटिंग समूह
कोटी चयन गर्नुहोस्
खेल शीर्षकहरू समाचार लेख अन्तर्राष्ट्रिय पोर्टल साइट
खेल समाचार हेडलाइन्स ग्लोबल लेख WebSite.WS
ग्लोबल खेल समाचार शीर्षक वेबसाइट लेख(WS) Buzz Media.Share र वेबसाइट लि Link्क सबै निःशुल्क छ.
「खेल समाचार शीर्षकहरू ग्लोबल लेख वेब साइट.डब्ल्यूएस」
खेल समाचार समाचार हेडलाइट्स सामाजिक मिडिया प्रयोग गरेर दुनिया भर मा व्यक्तिहरु को साथ लेख.
वर्ल्ड वाइड पोर्टल वेबसाइट खेल प्रमुख समाचार समाचार ग्लोबल लेख हो.
क्युरेसन मिडिया ग्लोबल साइट 「खेल समाचार हेडलाइन्स ग्लोबल लेख वेब साइट।डब्ल्यूएसएल लेख वेबसाइट वेबसाईट।. यो खेल हेडलाइन्स समाचार लेखले तपाईंलाई एक आश्चर्यको साथ प्रदान गर्दछ। सोशल मिडियामा फलो गर्नुहोस् (SNS). तपाइँको साइटमा लिinking्क र लेख प्रिन्टिting सबै साझेदारी सित्तैं हो. अधिक निःशुल्क जीवनशैली पाउनुहोस्. धन्यवाद!!
आउटस र पोट ओड्सको गणना गर्नमा द्रुत र सजिलो पाठ
गणना गर्दै बाहिर (कार्डहरूको संख्या जुन तपाईंको हात सुधार गर्न सक्दछ) र भाँडो परिस्थिति (भाँडामा पैसा को अनुपात बनाम तपाईंको अर्को कल गर्न आवश्यक राशि) प्राय: टेक्सास होल्डम पोकर खेलाडीको लागि आधारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ कि कोर्न को लागी र तिनीहरूको हात बनाउन को लागी. यद्यपि यो मेरो विचारमा यो तपाइँको निर्णयको एकल आधार हुनुहुँदैन कि तपाइँ अर्को कार्डको लागि कोर्न पर्छ. तपाईंले यो पनि निर्णय गर्नुपर्दछ कि तपाईंले खोज्नु भएको हातले तपाईंलाई भाँडो बनाउँदछ वा गर्दैन. कलकुलट कसरी गर्ने […]
शिविर वा विश्वको कुनै पनि ठाउँमा सौर चार्जर!
गत वर्ष मैले मेरो नातिनीको आइपड र सेल फोन चार्ज गर्नको लागि सोल्डीयस १ सौर शुल्क खरिद गरिरहेको बेला हामी नयाँ ह्याम्पशायरको व्हाइट माउन्टेनमा शिविर बनाइरहेका थियौं।. यो चार्ज गर्नको लागि सात प्लास्टिक एडेप्टरको साथ आउँदछ 250 पावर-भोको आईपड सहित विभिन्न उपकरणहरू, जेन माइक्रो एमपी3प्लेयर, ब्ल्याकबेरी, र नोकियाबाट मोबाइल फोनहरू, सीमेन्स, सोनी एरिक्सन, सामसु, र मोटोरोला. सौर चार्जरले कार्य गरे जस्तै निर्माताले भने, र कम थामा मा मेरो नातीको आइपड चार्ज […]
अनुकूलित गोल्फ क्लब को फाइदाहरु
त्यहाँ एक अनौंठ बहाना छन् गोल्फ मा एक खराब शट हिट को लागी को लागी, तर तपाईंको क्लबहरूलाई दोष दिनु भन्दा केही विवेकपूर्ण लाग्दछ. तर केहि केसहरूमा, तपाईंको क्लबमा खराब शट दोष लगाउनु कुनै पनि हास्यास्पद नहुन सक्छ. तपाईंको क्लबहरू तपाईंको आफ्नै स्विingको लागि विशेष रूपमा फिट गर्नाले तपाईंको खेलमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ. यदि तपाईंको क्लबहरू तपाईंको व्यक्तिगत विशिष्टतामा फिट छैनन्, तपाईं यसको लागि मेकअप गर्न तपाईंको स्विingको महत्त्वपूर्ण तत्वहरूको बलिदान गर्न सक्नुहुनेछ. एक ठूलो क्लबहरू कसरी खेल्छन् भन्ने उदाहरणको लागि […]
यो सबैबाट टाढा जानुहोस्
तपाईंसँग यो समयबाट टाढा जान चाहेको समय कहिले आएको छैन? मार्च / अप्रिलमा 1978, www.motherearthnews.com एक जोडी को बारे मा एक कहानी प्रकाशित जो मैक्लोड टापु किने ‘ केप ब्रेटन टापुको तटमा 90 ० एकड टापु, नोवा स्कोटिया, क्यानाडा. उनीहरूसँग केहि जनावरहरू छन्, किरानामा थोरै खर्च गर्नुहोस्, र द्वीप आफैंले धेरै राम्रोसँग सहि रहेको छ. यद्यपि यसले उनीहरूलाई केहि चुनौतीहरूको साथ प्रस्तुत गर्दछ: “समुद्र, तिमीलाई थाहा छ, भनिदैन “चंचल” केहि लागि छैन. A […]
रेसि Forका लागि आर सी कारहरू
आरसी कारको स्वामित्व पाउनु भनेको तपाईको आफ्नै स्वामित्वमा धेरै मिल्दोजुल्दो छ, वास्तविक कार. यद्यपि यसले ठ्याक्कै स’t्केत गर्दैन कि तपाईंले आरसी कारहरूको उपचारका लागि समान कार्यहरू गर्नुपर्दछ जुन तपाईंले ठूला कारहरूको व्यवहार गर्नुहुन्छ, यसले मर्मतका लागि खर्चको एक रकम पैदा गर्दछ. यद्यपि त्यहाँ फरक छन्, आरसी कारहरूको लागि खर्च र स्वामित्वको सर्तमा (विमानहरु, ट्रक वा बग्गी) खेलौनाका लागि वा शौकका लागि. भिन्नता ज्यादातर यो तथ्यमा निहित छ कि एक शौकको लागि एक राख्नु राम्रो प्रदर्शनको लागि विभिन्न गुणहरूको माग गर्दछ. पछि […]
लामो ड्राइव गोल्फ व्यायाम के हो
लामो ड्राइभ गल्फ अभ्यास गर्न को लागी थप्न सक्नुहुन्छ 30 तपाईंको ड्राइवमा गजको दूरी धेरै छोटो समयमा. तपाईसँग सामर्थ्य हुनु पर्ने लामो गोल्फ ड्राइभहरू ठोकिनु यो स्पष्ट छ. शक्ति दुबै शक्ति र तपाइँको गल्फ स्विंग को लागी लचिलोपन को बराबर हो. लामो ड्राइभ गोल्फ अभ्यास लागू गर्न को कुञ्जी तपाईंको गल्फ स्विंग मा मुख्य आन्दोलन हेर्न हो. यो के हो? के यो पार्श्व आन्दोलन हो? (छेउ छेउमा)? के यो ठाडो चाल हो? (माथि र तल)? म 'बीस प्रश्न र # 8217 रोक्छु […]
गल्फ बेसिक्स – ग्रीन्सको बारेमा
कसरी ड्राइभ गर्ने र जान्नेका बारे थाहा पाएर केवल तपाईलाई गोल्फ खेल्ने बारेमा जान्नु आवश्यक पर्दैन. गोल्फ एक बाह्य गतिविधि हो जुन तपाईं भूमिको एक जीवित भागमा खेल्नुहुन्छ, र ढोका बाहिर सबै कुरामा, आमा प्रकृतिले यो खेल खेल्न मन पराउँछन्. घाँस फरक छन्; तपाईंले हरियो वा एक झार प्याचमा थोरै बृद्धि भएको साथ सामना गर्न सक्नुहुन्छ. पुट बनावट द्वारा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, घाँस को लम्बाई र बनावट, र त्यहाँ वास्तवमा कति घाँस छ. एक सच्चा गोल्फर केवल सनी डीमा खेल्दैन […]
तपाईंको स्कूबा डाइभि Equipment उपकरण छनौट गर्दै
मनोरञ्जनात्मक खेलको रूपमा स्कुबा डाइभिंग लिनु अघि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ आफैले आवश्यक स्कूबा उपकरण र गियर प्राप्त गर्नुहोस्. त्यहाँ धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन् तर यदि तपाईं एक शुरुआत हुनुहुन्छ, यसबाट मास्क जस्ता आधारभूतबाट सुरू गर्न उत्तम हुन्छ, फिन्स, स्नोर्कल, र वजन बेल्ट, पछि उन्नत सेटहरूमा जानुहोस्. मूल कुरा: डाइभि mas मास्कले तपाईंलाई अगाडि गिलास प्लेटमा पानीमुनि हेर्न अनुमति दिन्छ. धेरै जसो डाइभि mas मास्कहरू यस तरीकाले निर्माण गरिन्छ कि प्रयोगकर्ताले सास फेर्न सक्दछ […]
अफ-रोड आर सी कारहरू
यो नाइट्रो वा इलेक्ट्रनिक रूपमा संचालित आरसी कारहरू, तपाईं अझै पनि राम्रो प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, आरसी कारको स्वामित्व र रेसि ofको पहिलो हात अनुभव यो एउटा ट्रक हो, प्लेन वा डु्गा? त्यहाँ केही केहि छनौटहरू छन् र अझै छनौट गर्न अझ बढी विकल्पहरू छन् किनभने आर सी खेलौनाहरू विभिन्न आकार र आकारहरूमा आउँदछन्. तपाईंको आर सी कारको लागि पहिले नै दुई विकल्पहरू उपलब्ध छन्. तपाईं या त यसलाई सडकमा वा बाहिर चलाउन सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईं थप माईलमा जान चाहनुहुन्छ र तपाईंको रेसि experience अनुभवमा केही एड्रेनालाईनको भीड थप्न चाहनुहुन्छ भने।, तपाईं सीए […]
किन गोल्फ परिधान यति डरकी छ?
गल्फ परिधान सबैभन्दा darkiest कपडाहरू बीच हो जुन मानिसलाई परिचित छ, अझै गल्फ एउटा राम्रो खेल हो जुन मानिसमा विच्छेदन गर्नका लागि परिचित छ? खैर त्यो हो जुन म निम्न टुक्रामा अन्वेषण गर्न चाहन्छु. पढ्न जारी राख्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईं मेरो रम्बलिंगसँग सहमत हुनुहुन्छ भने. खेलमा धेरै उत्कृष्ट गल्फर्सहरू वास्तविक ठूला ठूलाहरू हुन्? मेरो मतलब तपाईले किन देख्न सक्नुहुनेछ, उनीहरूले जीवनमा केहि पनि गर्नुपर्दैन तर एउटा खेल खेल्छन् र तिनीहरूलाई पहिलो दिनदेखि उनीहरूका माँमीहरूले चराउँदछन्. तिनीहरू के गर्दैनन् […]
क्यानडामा माछा मार्ने
यदि तपाईं माछा मार्नमा वास्तविक साहसिक अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसो भए क्यानाडा तपाईंको लागि उत्तम स्थान हो. क्यानाडामा नदीहरूको विशाल क्षेत्र छ, पोखरी, ताजा पानी ताल, नुन पानी र स्ट्रिमहरू. ताजा पानी र नुनिलो पानी माछा मार्ने क्यानाडालीहरु र पर्यटकहरु को मनपर्ने मनपराउनु हो. वन्यजन्तुलगायत क्यानाडामा माछा धेरै प्रचुर मात्रामा पाइन्छ. क्यानडाले धेरै प्रथम श्रेणी फिशिंग ट्रिपहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको समय र पैसाको अधिकतम लाभ उठाउँदछ. त्यहाँ कुनै कारण छैन जुन तपाईं निराश हुन सक्नुहुन्छ. क्यानाडा t छ […]
गोल्फ स्विंग मेकानिकहरू धेरै चाँडै सुधार गर्न सकिन्छ
उचित गल्फ स्विंग मेकानिक्स इष्टतम गल्फ प्रदर्शनको लागि एक आवश्यक शर्त हो. यदि तपाईं धेरै गल्फरहरू जस्तै हुनुहुन्छ, तपाईं जहिले पनि त्यो प्रतिलिपि बनाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ 'उत्तम’ गल्फ स्विंग. मलाई थाहा छ म हुँ. त्यो सहज शटमा हिट गर्न ठूलो लाग्दैन? तपाइँ चाहनुहुन्न कि तपाइँ यसलाई हरेक पटक गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो प्रो जस्तो अधिक समयसँग हुन्छ जस्तो समान भावना हुनेछ. यो यति उच्च हुनेछ! त्यसोभए के तपाइँ तपाइँको गोल्फ स्विंग मेकानिकी सुधार गर्नबाट रोक्दैछ? के तपाईलाई लाग्छ? […]
जितेको र हराउने कुरा: ब्ल्याकज्याक प्ले गर्न सुझावहरू
आज, ब्ल्याकज्याक सबैभन्दा लोकप्रिय कार्ड खेलहरू मध्ये एक जस्तो देखिन्छ. यो किनभने ब्ल्याकजेक खेलन सिक्न को लागी यति सजिलो छ. पोकर जस्तो छैन, ब्ल्याकज्याकसँग सम्झनको लागि कुनै संयोजनहरू छैन. ब्ल्याकजेकमा, खेलको उद्देश्य भनेको दुई कार्डको योगफल नजिक जान्छ 21. जब एक व्यक्ति कार्ड समाप्त हुन्छ 21, ऊ वा उनी खेल हराउँछ. सामान्यतया, एक खेलाडीले दुई कार्ड प्राप्त गर्दछ. खेलाडीहरूले आफ्नो कार्डहरू देखे पछि, तिनीहरूले निर्णय गर्नु पर्छ कि उनीहरू हिर्काउँछन् कि खडा हुन्छन्. जब एक व्यक्ति & # 8 भन्छ […]
दक्षिण प्रशान्त मा माछा मार्दै
दक्षिण प्रशान्त लामो समयदेखि परिचित छ किनकि पानीले दिन सक्ने रमाईलो अनुभवहरूको कारण. यो पर्यटकहरु र छिमेकी देशहरु को लागी प्रसिद्ध छ किनकि यो प्रस्तावना गर्न सक्ने रोमांच र उत्साहका कारण. ग्रीष्म aतु नजिकै आउँदा धेरै माछावाला न्युजील्यान्ड आउँछन्. यो मौसम हो जब टुना र बिलफिश समुद्री किनारमा नजिक एक न्यानो ठाउँ पाउनको लागि. वर्षको बाँकी सात महिनाको अवधिमा, त्यो समय माछावालाहरु लाई एक ठूलो समय छ विशेष गरी महिना पछि t को छ […]
डुating्गा धेरै आरामदायी मनोरञ्जन हुन सक्छ
डुating्गा धेरै आरामदायी मनोरञ्जन हुन सक्छ, हेरविचार बिना नदी वा तालमा तैरिरहन्छ. अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि, डु bo्गा आफै नै शौक को पूरा बिन्दु हो: एकचोटि तपाईं डु in्गामा जानुभयो, तपाई सेट हुनुहुन्छ. धेरै व्यक्तिले आफ्नो डु boat्गा जहाँसुकै गए जहाँ उनीहरू आफ्नो कारको पछाडि जोडिएको ट्रेलरमा डुating्गा जान जान्छन्, प्रदान गरिएको डु the्गा पर्याप्त सानो छ ‘ ठूला डु boats्गा मरीनामा राख्नु पर्छ, जुन महँगो हुन सक्छ. आज पनि, धेरै व्यक्ति अझै पनी बाहिर आफ्नो डु boats्गा निर्माण […]
तपाईंको अफिसमा व्यायामका लागि गोल्फ निर्देशन सल्लाह
यदि तपाइँ विशिष्ट उत्साही गोल्फर हुनुहुन्छ जो खेलको बारेमा सबै समयमा सोच्दछ, तपाई अफिसमा हुँदा पनि, त्यसोभए तपाईको अफिसमा व्यायामका लागि यो गल्फ निर्देशन सल्लाह ठूलो मद्दतको हुनेछ. तर पहिले यो व्यायाम को मूल्य को मूल्यांकन गर्न महत्वपूर्ण छ, जुन यो लेखमा गल्फ निर्देशन टिपको बारेमा हो. गल्फ स्विंग मानव शरीर द्वारा प्रतिरोध गरिएको छ किनकि यो एक धेरै अप्राकृतिक चाल हो, जहाँसम्म मानव शरीरको सवाल छ. गल्फ-विशिष्ट स्ट्रेचिंग व्यायाम […]
तीरंदाजी को लागी सुरक्षा सल्लाह
कुनै पनि खेल जस्तो आर्चरीको नियम हुन्छ, धेरै जसो नियमहरू उत्तम अभ्यास नियम हुन् जुन आर्चरहरू र दर्शकहरूलाई सुरक्षित राख्न प्रयोग गरिन्छ. सामान्यतया प्रतिस्पर्धा वा केवल रमाइलोको लागि शुटि whether यी नियमहरू पालन गर्न राम्रो अभ्यास हो. 1. लक्ष्यमा सधैं तीरहरू लक्ष्यित गर्नुहोस्. एर्रो खतरनाक हतियार हुन सक्छ र लक्ष्य बाहेक अरू केहि पनि गर्न को लागी हुनु हुँदैन. 2. तीरहरू निरीक्षण गर्नुहोस् प्रत्येक शॉट अघि ती क्षतिग्रस्त भएको छैन भनेर सावधानीपूर्वक निरीक्षण गर्नु पर्छ. यदि एर्रो शाफ्टले क्षति पुर्‍याउँछ भने यो सह […]
विभिन्न पाठ्यक्रमहरूमा प्रतिष्ठित गोल्फ
गोल्फको बारेमा चलचित्रहरू मनोरञ्जनका लागि मात्र हुन् र गम्भीरताका साथ लिनुहुँदैन. जबकि गोल्फरहरू र अरूहरूले कथाको आनन्द लिने छन्, पात्रहरू, र परिणामहरू, तिनीहरू साँच्चिकै गोल्फ राउन्डको आलोचना नगर्न सावधान हुनुपर्छ किनकि तिनीहरू प्राय जसो सम्पादन र क्यामेरा चालहरूको माध्यमबाट काल्पनिक हुन्छन्।. जबकि कलाकारहरु आफ्नो खाली समय मा गल्फ खेल्न सक्छ, तिनीहरू प्राय: चलचित्रको समयमा प्रदर्शन गरेको धेरै चालहरू प्रदर्शन गर्न सक्षम छैनन्. तर यसको मतलब यो होइन […]
क्यासिनो बोनसहरूमा क्र्यास कोर्स
अनलाइन क्यासिनोहरू हालसालै अनलाइन संसारमा बाढी आएको छ. यस्तो देखिन्छ कि उनीहरू अनलाइन क्यासिनोमा आफ्नो भाग्य प्रयास गर्न अधिक र अधिक खेलाडीहरू आकर्षित गर्न धेरै मेहनत गरिरहेका छन्. तिनीहरू सम्भावित खेलाडीको ध्यान खिच्न विभिन्न प्रस्तावहरूको बारेमा सोच्न प्रयास गरिरहेका छन्. त्यस्तै एउटा पदोन्नतिले विभिन्न प्रकारका क्यासिनो बोनसहरू प्रदान गर्दैछ जुन तिनीहरूको अनलाइन क्यासिनोमा खेल्नको लागि. क्यासिनो बोनस प्रस्ताव छन् कि अनलाइन क्यासिनोहरू द्वारा प्रदान गरिएको छ जुन एक खेलाडी को लाभ लिन सक्षम गर्दछ […]
एक महान गल्फ उपहार चयन को लागी सुझावहरु
यो गम्भीर गोल्फको लागि क्रिसमस गल्फ उपहार हो वा परिवार पुनर्मिलन वा कम्पनी प्रतियोगिताको लागि एक रमाईलो पुरस्कार, वास्तवमा सराहना गरिएको एक गल्फ उपहार लिने योजनाको एक बिट लिन्छ. यहाँ केहि सुझावहरू छन् जुन तपाईलाई उपहारलाई गोल्फरको कौशल स्तरमा समायोजन गर्न मद्दत गर्दछ. सबैभन्दा पहिले कुरा भनेको गोलिफरको कौशल स्तर निर्धारण गर्दछ जसले उपहार पाउनेछ. खेलको एक अनुभवी दिग्गज4अशक्तता सम्भवतः निर्देशन पुस्तकहरू वा प्रशिक्षण सहयोगहरूमा थोरै मूल्य राख्दछ […]
बाँस र स्प्लिट केन रॉडहरू
आधुनिक प्रविधिहरूले हाम्रो लागि धेरै सजिलो र सुविधाजनक चीजहरू विकास गरेको छ. एrs्गलरहरूको लागि जसले माछा समात्न मन पराउँछ, आधुनिक प्रविधिको योगदान मध्ये एक उडान माछा मार्ने डण्डको विकासको साथ स्पष्ट छ. मूल रूपमा, फ्लाई फिशिंग रडहरू केवल बाँस र स्प्ल्ट बँग्राबाट बनाइएको थियो. तर बाँस उडान माछा मार्ने पत्ता लगाउनु अघि, यो ग्रीनहार्ट भनिने उष्णकटिबंधीय काठ हो जुन चीनको गुआंग्डोंग प्रान्तमा फेला पार्न सकिन्छ जुन फ्लाइ फिजमा डन्डाका लागि सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। […]
प्रदर्शन सुधार गर्न गोल्फ स्ट्रेचिंग रहस्य
हालसालका बर्षहरूमा ठूलो र यसैले भारी क्लब टाउकोको प्रवृत्तिले गोल्फ स्ट्रेचिंग सीक्रेट्सलाई प्राप्त गर्न अझ महत्त्वपूर्ण बनाएको छ. गल्फका लागि चीजहरू अझ खराब बनाउनको लागि गोल्फ फैलाउने रहस्यलाई अँगालोमा चासो छैन, गल्फ अन्य खेलहरूको विपरीत यस्तो खेल हो जहाँ निरन्तर खेल्दा स्वास्थ्य र सहनशीलता सुधार हुन्छ. यो किनभने गल्फ स्विंग केवल एक सेकेन्ड रहन्छ. यो शिक्षामूलक छ कि धेरै गल्फर्सहरूले यसलाई अझ महत्वपूर्ण तथ्यलाई बुझेका छैनन्. यो कारण हो कि कसलाई उनीहरूले यो धेरै di पाए […]
सुरक्षा रिमाइन्डरहरू फिसिंग
माछा मार्ने काम एक आरामदायक शौक हो र अधिक रमाइलो छ जब परिवारको सदस्यहरू र प्रियजनहरूसँग छोटो छुट्टीको बेला वा सप्ताहन्तमा पनि. यो धेरै व्यक्तिको लागि शारीरिक शारीरिक खेल नहुन सक्छ, तर अन्य बाहिरी गतिविधिहरूमा समान, माछा मार्न अझै सुरक्षा चाहिन्छ. कसैले पनि सुरक्षामा सम्झौता गर्नु हुँदैन. मुख्य रूपमा, माछा मार्न जानु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पोशाक गतिविधिको लागि ठीक छ. मौसम जहिले पनि खातामा राख्नुपर्दछ किनकि यदि तपाई कहिले भन्न सक्नुहुन्न भने […]
फुटबल खेलमा ल्याउनका लागि आईटमहरू
त्यहाँ NFL फुटबल खेल मा भाग लिनु र व्यक्तिगत मा यो खेल घटना वरपर सबै उत्साह उत्साह अनुभव भन्दा राम्रो केहि छैन।. उनीहरूलाई जो खेलमा के ल्याउने भनेर निश्चित छैन, त्यहाँ केही आवश्यक वस्तुहरू छन् जुन सबै फ्यानहरू र दर्शकहरू बिना हुनु हुँदैन. उचित पोशाक पहिलो र प्रमुख, जो एक एनएफएल फुटबल खेल मा भाग लिन्छ उपयुक्त पोशाक लगाउनु पर्छ को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी आफ्नो अनुभव एक सुखद एक हो. फ्यानहरूले आरामदायक लुगा लगाउनु पर्छ जुन […]
फलामको पाम भाग 1
आइरन पाम Q&सिगुung रिचर्ड क्लियर पार्टको साथ 1 Q. तपाईंको फलाम ताम तालिमको इतिहास के हो? A. मेरो मूल प्रशिक्षक टायरोन ज्याक्सन थिए जो डा फ्रेड वूको वरिष्ठ चेला थिए. डा वू ली यिंग-अर् under अन्तर्गत एक वरिष्ठ शिष्य थिए. ली यिंग-अर्ng आखिरी पुस्ताका एक आश्चर्यजनक र महान कुंग फू मास्टर थिए जो अन्ततः ह Hongक Kongमा बाँचिरहे. त्यहाँ उनी आन्तरिक प्रणाली मार्शल आर्ट एसोसिएशनका अध्यक्ष थिए, ह Hongक Kong एक्यूपंक्चर रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष, र उप राष्ट्रपति […]
एक गोल्फ स्विंग भिडियो आफ्नो खेल परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ?
त्यहाँ धेरै गोल्फहरू छन् जो धेरै गोल्फ स्विंग भिडियोको पर्दाफास भएका छन् र उनीहरूको खेलमा कुनै प्रभाव भएको छैन. कम्तिमा सकारात्मक होईन. वास्तवमा केहीको लागि उनीहरूको खेल लगातार खराब हुँदै गयो जब उनीहरू कतै गोल्फ स्विंग भिडियोबाट सिकेका चीजहरू लागू गर्न प्रयास गर्छन्।. यस कुराको सत्यता यो हो कि त्यहाँ धेरै गोल्यरहरू छन् जसले विश्वास गर्दैनन् कि एउटा गोल्फ स्विंग भिडियोले कुनै गोल्टरको खेलमा वा यसको प्रभावमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ’ गुण. त्यहाँ धेरै reas छन् […]
एउटा जुवा प्रणाली जुन काम गर्दछ
जुवा सुरु भएदेखि, त्यहाँ मानिसहरू छन् जुन सही जुवा प्रणाली खोज्न कोसिस गरेका छन् – जुवाडीको पक्षमा यस्तो अनौठो कुरा राख्छ कि धनीहरू लगभग निश्चित रूपमा ग्यारेन्टी हुन्छन्. यी सबै हजारौं वर्षहरूमा, के कसैले वास्तवमै काम गर्ने जुवा प्रणाली भेट्टाएको छ?? यद्यपि त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन जुन जुनसुकै प्रकारको जुवामा समस्याहरू हराउन सिस्टमहरू भेट्टाए, तपाईंले सुन्नुहुने प्रायः सबै प्रकारका जुवा प्रणालीहरू जुवाको विशेष प्रकारका लागि हुन्; जस्तै ब्ल्याक […]
गोल्फ क्लब पुटरहरू: छनौटा पक्षहरू विचार गर्नुहोस् जब एउटा सौंटर चयन गर्दा
यी छवटा कारकहरू ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि तपाईं एक प्रकारको पटर प्रकारको छनौट गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि यसलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै महसुस गर्दछ।. 1. झुटो कोण. यो शाफ्ट र जमिन बीचको कोण हो. यस कारकले निर्धारण गर्दछ कि यदि पुटर टाउको जमिनमा पूरै फ्लैट बसिरहेको छ कि जब तपाइँ राख्दै हुनुहुन्छ. एक प्राप्त गर्नुहोस् जसले क्लबको टाउकोलाई जमिनमा आराम गर्न दिन्छ जब तपाईं आफ्नो अडान लिनुहुन्छ. 2. पुटरको लम्बाई. पटरको लागि मानक लम्बाई हो 35 ईन्च. सही […]
फ्लाइ फिशि – चेसको खोजीमा
फ्लाई फिशिंगको साथ, कहिलेकाँही यो सबै चेसको बारेमा हो. यहाँ एक दिनको यात्रा छ जुन फलदायी थिएन, तर अन्तमा ठीक भयो. कोलोराडो फ्लाइ फिशिंग हामीले सेप्टमा न्यानो बिहान राफ्टमा राख्यौं. दृष्टिमा बादल बिना. मेरो अपेक्षा बढी थिएन, चल्तीको घमाइलो दिनले माछालाई तल राख्न दिन्छ, कम से कम कोलोराडो को यो खंड मा. जब माछा बढ्दैन, म सिधा टान्डम स्ट्रिमरहरूको लागि जान्छु; तपाइँको सेन्टको पीछा गर्दै ठूलो भुँइ छोडेको भन्दा रमाईलो केहि छैन […]
ड्रू ब्रिज: 2001 ड्राफ्ट डे पिक्सहरू
ड्र्यू ब्रेस जनवरी मा जन्म भएको थियो 15, 1979 अस्टिन मा, टेक्सास. जे होस् Bree NFL मा सबै भन्दा ठूलो वा सबै भन्दा धेरै एथलेटिक क्वार्टरब्याक होईन, उहाँ पक्कै पनि एक राम्रो छ. आफ्नो शुरुआती दिनदेखि ऊ यो प्रमाणित गर्न बाध्य भएको छ कि कडा परिश्रम र दृढ संकल्पले खेलकुद र आकार जस्ता चीजहरूलाई ओझेलमा पार्न सक्छ. र एउटा कुरा पक्का छ; ब्रिसले यो सफलतापूर्वक केहि समयको लागि गरिरहेको छ. ब्रिसले आफ्नो हाई स्कूलको बल अस्टिनमा खेले, टेक्सास वेस्टलेक हाई स्कूल मा. आफ्नो वरिष्ठ मौसम को समयमा Bree उनको चिया नेतृत्व गर्नुभयो […]
एक अधिक लगातार र अधिक सटीक स्विing
जब म मेरो हातमा मेरो गोल्फ क्लब प्राप्त, मलाई कभर बलको पछाडि ठोक्ने जस्तो लाग्छ. यसले मेरो ठूलो शक्ति प्रयोग गरेर बल हिट गर्दा यसले मलाई ठूलो महसुस गराउँदछ. केवल बल कडा हिट गर्न सक्षम हुनुको मतलब यो होइन कि म राम्रो गल्फ खेल खेल्छु. यदि तपाईं थोरै तनाव कम गर्न चाहनुहुन्छ भने अगाडि जानुहोस्, सबै तरिकाहरूद्वारा तर यो उत्तम ड्राइभि range दायरामा छोडियो. यदि तपाइँ गोल्फको एक राम्रो खेल खेल्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले थोरै शक्तिमा समात्नु पर्छ. गल्फर्स सबैभन्दा ठूलो गल्ती मध्ये एक’ बनाउन t छ […]
फ्लाइ फिशिंगको कला
फ्लाई माछा मार्नु भनेको के हो? अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि, माछा मार्नु भनेको माछा मार्नु मात्र हो. लाइनमा केही प्रलोभन फाल्नुहोस्, यसलाई पानीमा फाल्नुहोस् र चुचुरोको लागि कुर्नुहोस्, तर माछा मार्ने उत्साहीहरूका लागि, यो यति धेरै छ. एक पुरानो एling्गल विधि, फ्लाई फिशिंग एक विधि हो जुन सुरूमा मुख्य रूपले ट्राउट र सालमन समात्नको लागि विकसित गरिएको थियो. हाल, यद्यपि, यो पाइक समात्न पनि प्रयोग गरिन्छ, कार्प, बास र अन्य प्रजातिहरू. फ्लाई फिशिंगले प्रलोभनको रूपमा एक कृत्रिम उडान प्रयोग गर्दछ, जुन थ्रेडको प्रयोग संग हुकमा बाँधिएको छ, प्वाँख, भुवा […]
गोल्फ च्यानल फस्टाउँदैछ
गोल्फ च्यानलको लोकप्रियता फट्यो. एमेच्योर गोल्फहरू पहिले भन्दा पहिले हेरिरहेका छन् कि एक विशेष टिप प्राप्त गर्न जुन उनीहरूको खेल सुधार गर्न सक्दछ. गल्फ च्यानलसँग ठूलो स्रोत छ जुन कहिँ पनि दायर गर्छ, तपाइँको स्विing मा काम गरीरहेको सफलतापूर्वक बालुवा जालबाट हिट गर्ने. उनीहरूको अनलाइन साइटमा अलि गहिरो जान्नुहोस् र पाठ्यक्रममा तपाईंको प्रदर्शन सुधार गर्नका लागि धेरै सुझाव र सुझावहरू भेट्टाउनुहुनेछ. धेरैले आफ्नो खेल सुधार गर्नका लागि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्छन्. T […]
मेरो कार्यालय – Pate पछाडि.
मलाई समात्न मन पर्थ्यो – मसँग मेरो सम्पूर्ण खेल थियो. म सबै देख्न सक्छु. फिल्डरहरू राख्नु मेरो काम थियो. लामो फ्लाई बलहरू निष्पक्ष वा फोउल थिए कि देखेर. पिटरमा के थियो वा अभाव छ, मैले देखे, साथै. के पिटरलाई एक्शनमा ब्रेक चाहिएको थियो किनकि ऊ थाकेको थियो? यदि उसले गरेको भए म त्यस टि to्गाको लागि एक सानो यात्रा तिर्छु. क्षेत्र मा सामान्य हो जो म थियो. कोचको एक सीधा लिंक. क्याचरमा स्विच गर्नु भनेको एक खेलाडीको रूपमा मैले गर्न सक्ने उत्तम कुरा थियो. म प्लेटको पछाडि धेरै रमाइलो थिएँ. मेरो […]
डलास काउबोइलाई प्राय जसो दर्शाइएको छ “अमेरिकाको टोली” र यो किन हेर्न सजीलो छ. तिनीहरूसँग सबै एनएफएल टीमहरूमा स्पष्ट रूपमा प्रशंसकहरू छन्, तिनीहरूको storied ईतिहास र महान खिलाडीहरु को आफ्नो phalanx को लागि धन्यवाद. काउबोई, जो हाल डलास मा इरभि of को उपनगर मा खेल्ने, टेक्सास, आठमा सब भन्दा सुपर बाउल उपस्थिति छ. उनीहरुसँग एनफिएलमा most भन्दा बढी सुपर बाउल च्याम्पियनशिपको कीर्तिमान पनि छ, रेकर्ड छ कि तिनीहरूले पाई संग साझा […]
किन गोल्फ स्विंग प्रशिक्षण एड्सले तपाईंको लागि काम गरेन
गोल्फ स्विंग प्रशिक्षण एड्स धेरै जसो शौकिया गल्फर्स संग एक खराब प्रतिष्ठा छ. तिनीहरू मध्ये धेरै गोल्फ स्विंग प्रशिक्षण सहायता बेच्ने आक्रामक कम्पनीहरूको शिकार भएका छन्. परिणाम यो छ कि तिनीहरू मध्ये धेरैले पहिले उनीहरूको खेलमा निर्दिष्ट कमजोरीहरूमा ध्यान नदिई खरीदहरू समाप्त गरे जुन उनीहरू सुधार गर्न चाहन्छन्।. अरूले विशेषज्ञ सल्लाहको फाइदा बिना गोल्फ स्विंग प्रशिक्षण एड्स खरीद गरे. धेरै चोटि दृष्टिकोण बजार मा एकदम नयाँ गोल्फ स्विंग प्रशिक्षण एड्स को पकड गर्न को लागी आएको छ, रथ […]
ताजा पानी बनाम मा विचार. नुन पानी माछा मार्ने
मलाई कुनै पनि प्रकारको माछा पक्रन मन पर्छ, तर केहि मानिसहरु मिठो पानीमा माछा मार्न रुचाउँछन् र केहि मानिसहरु ताजा पानीमा माछा मार्नु रुचाउँछन्. धेरै मानिसहरु आफ्नो निर्णय को लागी एकदम कडा महसुस गर्छन्, र कहिलेकाँही तपाईं तिनीहरूबाट एकै प्रकारको प्रतिक्रिया देखाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ यदि तपाईंले तिनीहरूको धर्मलाई प्रश्न गर्नुभयो भने. ताजा पानी माछा मार्ने सामान्यतया माछा पक्रने शैलीमा ढिलो र पछाडि माछा पक्रने माछा मार्ने अधिक पर्खाइको शैली हो. तपाईले ताजा पानीमा माछा मार्दा माछा खोज्न पनि कडा परिश्रम गर्नुपर्दछ. यद्यपि मलाई लाग्छ कि fis […]
गोलफरको लागि उपहार खरीद गर्नु अघि…आफैलाई सोध्नुहोस्3प्रश्नहरू
यो सबैको लागि स्पष्ट हुनुपर्दछ कि उपहार गोल्फर सामान्यतया सबै भन्दा अधिक प्रशंसा गर्दछ, त्यो हो जुन उनीहरूको खेल सुधार गर्दछ. धेरै गोल्फहरू निरन्तर आफ्नो खेलमा सुधार गर्ने उपायहरू खोजिरहेका हुन्छन्. यो पाठ्यक्रममा हुँदा प्राय जसो उनीहरूको प्रत्येक विचारलाई हाकिम बनाउँदछ र धेरै चोटि जब यो बन्द हुन्छ. गोल्फरको लागि उपहार छान्नु अघि, यो आफैलाई तल सोध्नु उपयोगी छ3प्रश्नहरू र उनीहरूको लागि पर्याप्त उत्तरहरू प्राप्त गर्न. याद गर्नुहोस् कि यो एउटा कार्य हो जुन धेरै जटिल छ […]
मिश्रित मार्शल आर्ट - सर्तहरू सिक्नुहोस्
नियम र केहि एमएमए कार्यक्रमको स्वीकृति संग त्यहाँ एमएमए को नयाँ अनुयायीहरु को एक विस्फोट भएको छ (मिश्रित मार्शल आर्ट) यस लेखको उद्देश्य केहि प्रयोगका सर्तहरूसँग यस खेलका नयाँ फ्यानहरूलाई परिचित गर्न मद्दत गर्नु हो. यदि तपाईंसँग केही शव्दहरूसँग आधारभूत समझ छ भने तपाईं खेललाई अधिक रमाईलो देख्नुहुनेछ. दिमागमा राख्नुहोस् कि यो विवरण प्रत्येक पक्ष समावेशी छैन, तर शुरुआतका लागि गाईडको अधिक. सबमिशनहरू: सबमिशन गर्ने तरिकाहरू हुन् […]
शक्ति व्यक्तित्व ‘ विशाल हतियारको साथ
याद गर्नुहोस् जब तपाईं हाई स्कूलमा हुनुहुन्थ्यो. यति धेरै वर्ण र व्यक्तित्व. ठुलो मान्छे, ठूलो मुख, हास्यास्पद केटाहरू, रमाईलो gals र धेरै अरू दयालु बच्चाहरु को एक. यहाँ मलाई लाग्छ कि तपाईसँग सम्बन्धित छ. मेरो पहिलो गिलि छाप थियो 12 वर्ष पुरानो. ऊ यति विशाल थियो. म सम्झन्छु कि म उनीबाट हिटिन चाहान्दिन. यदि मेरो टीममा गिली छ भने मलाई थाहा थियो मसँग किनार छ. एक शक्तिशाली लाभ. गिलि मेरो छिमेकको पल बुनिन थिए. उसंग थियो 20-22 बाइसेप्स, र घाँटी लगभग राउको रूपमा […]
महत्वपूर्ण गोल्फ स्विंग आन्दोलनले सफलता ल्याउँछ
'मलाई लाग्छ कि यो तपाईले भनेको जस्तै हतियारहरू कसरी स्विंग गर्ने भन्ने बारेमा हो जुन मेरो गल्फ स्विंगमा वास्तविक सुधार भएको छ. म गोल्फ खेल्दै छु 18 बर्ष र मैले यस आन्दोलनमा मास्टर गर्न पहिले कहिले पनि गरेको छैन. तर अब क्लब प्रत्येक चोटि स्विंग गर्दा बलमा छुट्टै आउँछ।’ 'तपाईको पहिलो पुस्तक हो जुन मैले गल्फ स्विingको बारेमा पढेको छु जसमा एकको हतियार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट वर्णन छ।, र एक फरक मा एक पटक यो एक फरक बनाउँछ […]
क्लिन्टन पोर्टिस : 2002 ड्राफ्ट डे पिक्सहरू
क्लिन्टन पोर्टिस सेप्टेम्बरमा जन्म भएको थियो 1, 1981 लौरेल मिसिसिपीमा. पोर्टिस आजको खेलमा सब भन्दा राम्रो चालु ब्याक हो, र जब यो हाईस्कूल फुटबल खेलिरहेको थियो यो साँचो हो. आकारको साथ, खेलाडी, र छिटो पोर्टिसले सयौं गजको वर्ष र बर्ष बाहिरको रैक किन देख्न सजिलो छ. एक सफल उच्च माध्यमिक क्यारियर पोर्टिस संग कलेज फुटबल खेल को लागी सम्पूर्ण देश मा कुनै पनि स्कूल मा क्षमता थियो. उसले युनिवर्सिमा आफ्नो खेल लिने निर्णय गर्यो […]
तपाईको गोल्फ खेल छिटो सुधार गर्न शीर्ष सुझावहरू
गोल्फ खेल्नु भनेको स्वि swको बारेमा हो. यदि तपाईंसँग सही स्विing छ भने तपाईं एक उत्कृष्ट गल्फ खेल विकास गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाइँको स्विing शक्ति र उद्देश्य को कमी छ भने तपाइँको गोल्फ खेल पीडित हुनेछ. दुर्भाग्यवश, यो गल्फ खेल्ने एक अपरिहार्य तथ्य हो. कसरी तपाइँको गोल्फ क्लब स्विंग गर्न सिक्नु भनेको तपाइँको गोल्फ खेल सुधार गर्न को लागी एक महत्त्वपूर्ण कारक मात्र होइन, यो पनि गाह्रो कारक हो. त्यहाँ नयाँ गल्फर्सको ठूलो बहुमत उनीहरूले पत्ता लगाए कि तिनीहरू केवल एउटा गोल्फ क्लब लिन सक्दैनन् र एक प्रो जस्तो झुण्ड्न सुरू गर्न सक्दैनन्. मि […]
10 परम टेक्सास होल्ड'म बताउँछ – भाग 1
एक खेलाडीको कार्डहरू छुट्याउन सक्षम हुनु तपाईंलाई खराब हात भएको बेलामा तपाईंको पैसा बचत गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई राम्रो हात भएको बेला भाँडो जित्न मद्दत गर्दछ।. अवश्य, तपाईं विरोधीहरू कुन कार्डहरू देख्न सक्नुहुन्न. केवल तपाईंसँग त्यहाँ अनुहार र शरीर अभिव्यक्तिहरू छन्. यसमा2भाग गाइड, म पढाउँछु 10 नेट मा सबै भन्दा राम्रो सुझाव को. यी आश्चर्यजनक रहस्यहरू हुन् जसले तपाईंलाई खेलिरहेका टेबुलमा प्रत्येक डलर जित्न मद्दत गर्दछ. एक खेलाडी को बताउँछ तिनीहरू के बाट […]
एक अनुचित टेन्डम साइकल ‘ दुईको लागी साइकलले बनाएको नयाँ शैली
अघिल्लो लेखहरूमा हामीले हेरेका थियौं कि फर्किने साइकल कहाँबाट आएको हो र यस लेखमा यसका फाइदाहरू के के हुन् हामी तपाईका कारणहरूको बारेमा हेर्नेछौं किन तपाइँ र तपाइँको पार्टनरले तपाइँको अर्को खरीदको रूपमा परम्परागत टान्डमको ठाउँमा एक बेग्लै टान्डम साइकललाई विचार गर्नुपर्छ।. तल कुनै कारणहरू छन् किन एक बेग्लै टान्डम साइकल खरीद तपाईं को लागी सही विकल्प हुन सक्छ. 1. अब तपाईं बस्नुहुन्छ जहाँ ती सानो यात्रा को लागी एक कार को उपयोग गर्न आवश्यक छैन. केवल आफ्नो बाइक र साइकमा हप गर्नुहोस् […]
गल्फ फिटनेस प्रशिक्षण ग्रेट गोल्फ बराबर
यदि तपाईंले टेलिभिजनमा कुनै गोल्फ हेर्नुभएको छ भने तपाईंले टिप्पणीकर्ताको गल्फ फिटनेस प्रशिक्षण उल्लेख गरेको सुन्नुभएको होला. यो कुनै गोप्य कुरा छैन 95 पेशेवर गोल्फरहरु को प्रतिशत गल्फ फिटनेस प्रशिक्षण को लागी के गर्दै छन्. यदि त्यहाँ जीविकोपार्जन तिनीहरूको प्रदर्शनमा निर्भर गर्दछ र तिनीहरू गल्फ फिटनेस प्रशिक्षणमा भाग लिइरहेका छन्, किन एमेच्योर गोल्फर्सले समान गर्दिन? सबै खेलकुदहरूको मानव शरीरमा शारीरिक रूपमा माग गर्ने आन्दोलनहरू मध्ये एक गोल्फ स्विing हो. एक टि स्विing गर्दै […]
बास फिशिंग ट्याकल
बास फिशिंग ट्याकल मत्स्य पालनको लागि सबैभन्दा आधारभूत उपकरण हो बास बास फिशिंग आराम गर्ने एउटा सुन्दर तरिका हो. संयुक्त राज्य अमेरिकामा जहिले पनि धेरै प्रतियोगिताहरू हुन्छन्, जुन विश्वका अन्य भागहरूमा बासको घर हो. राम्रो बास फिशिंग ट्याकल त्यस्तो चीज हो जुन बास माछावालाको रूपमा तपाईंको सफलताको लागि महत्त्वपूर्ण छ (वा महिला). बास फिशिंग ट्याकल ‘ के यो यति खास बनाउँछ? जब तपाईं बक्सिंग गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंसँग सँधै के हुन्छ? बक्सि glo ग्लोभ्सको एक जोडी. जब तपाई बास माछा मार्न जानुहुन्छ, के गर्छौ […]
उत्तम पोष्ट र ब्यालेन्स मार्फत उत्तम गल्फ स्विंग
प्रत्येक गोल्फर निरपेक्ष स्विंगको मायावी महसुसको खोजीमा लगातार हुन्छन्. पुस्तक शीर्षकमा लेखिएका छन्. निर्देशनहरू भिडियोहरू उत्तम उत्तम स्विंगको रहस्यहरू’ मेल अर्डर र इन्टरनेट मार्फत हटककेहरू बेच्नुहोस्. सबैजसो सबै जान्न चाहान्छन् कि पेशेवरहरूको जस्तो स्विing गर्न के गर्नु पर्छ. सत्य त्यहाँ कुनै 'उत्तम स्विंग छैन’ ‘ कम से कम त्यहाँ प्राप्त गर्न को लागी कुनै एक विधि छैन. यदि हामीले प्रोफे हेर्ने बर्षबाट केही पनि सिकेका छौं […]
छिटो र उग्र गो कार्टहरू! कसरी एक सस्तो खरीद गर्ने!
गो कार्ट्सले तपाईंको मुटु पम्प बनाउँछ लगभग अरू केहि जस्तो छैन. यदि तपाइँ गो कार्टि theको रोमाञ्चमा अंकित हुनुभएको छ र तपाइँ एउटा पातलो नयाँ गो कार्ट किन्नको लागि मर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ केहि तरिकाहरू तपाईंले सिक्नु पर्छ।. थोरै धैर्यता संग गो कार्ट्स को रूप मा अधिक को लागी किन्न सकिन्छ 50% नियमित खुद्रा मूल्य बन्द. तिनीहरू अविश्वसनीय रमाईलो छन्, र ती दिनहरु एकदम लोकप्रिय भएको छ. तपाईं लगभग हरेक परिवार रमाईलो केन्द्र वा मनोरञ्जन पार्क मा गो कार्ट्स पाउन सक्नुहुन्छ. रेसि go गो कार्टहरू वा सडक ग्रोकारहरू बन्द छन् […]
पछाडि व्यायाम र गल्फ पर्यायवाची छन्
फिर्ता व्यायाम र गल्फ. यो एक साधारण भाजक जस्तो आवाज छैन? गल्फमा सबै चोटपटक, तल्लो फिर्ता सबैभन्दा उच्च एक हो. किन गोल्फको लागि व्यायाम फिर्ता गर्न महत्त्वपूर्ण छ भनेर वर्णन गर्न, एक गोल्फर किन बुझ्नु पर्छ. गल्फ स्विing सबैभन्दा धेरै मध्ये एक हो (यदि सबै भन्दा बढी होईन) तल्लो फिर्ता तनावपूर्ण आंदोलनहरु. यो चित्र. तपाईं सुरूमा स्थिर स्थितिमा हुनुहुन्छ; त्यसो भए तपाईले आफ्नो माथिल्लो शरीर घुमाउने प्रयास गर्नुहोस् जहाँसम्म तपाईं जानुहुन्छ, तल्लो शरीरलाई जति सक्दो स्थिर राख्न सक्नुहुन्छ […]
खेल हेडलाइन्स समाचार व्यापक जानकारी साइट
विश्व खेल शीर्षक समाचार दिनुहोस्, स्तम्भहरू, र लेखहरूमा शीर्षकहरू विश्वभरि सबैलाई. वर्ल्ड वाइड वेब 「खेल समाचार शीर्षकहरू ग्लोबल लेख वेब साइट।डब्ल्यूएस」 यो हो अन्तर्राष्ट्रिय खेल शीर्षक हेडलाइटहरू लेख बुज हुन् र विश्वभर फैलिएको छ।. सामाजिक नेटवर्कमा सबै संग साझा गरौं.
आशा छ कि खेलकुद हेडलाइन्स समाचार लेख तपाईलाई उपयोगी छ. यस अन्तर्राष्ट्रिय खेल शीर्षक हेडलाइटहरू लेख र खेल हेडलाइन्स विस्तृत समाचार सारांश साइट विश्वभरिका मानिसहरूसँग साझेदारी गर्नुहोस्. म तिम्रो खुशी चाहन्छु. धन्यवाद.
अन्तर्राष्ट्रिय खेल शीर्षक हेडलाइट लेख लेख वेबसाइट.
एक कराटे स्टूडियो उठाउने तीन चरणहरू.
यदि तपाईं म जस्तो हुनुहुन्छ, तपाईं अलि राम्रो आकारमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ।? यो भन्दा राम्रो तरिका के मार्शल आर्ट अप शुरू गर्न भन्दा।? त्यहाँ शाब्दिक सयौं विभिन्न प्रकारका मार्शल आर्ट शैलीहरू छन्, र तपाईं यो निश्चित गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईं आफ्नो कराटे पाठहरूमा राम्रो सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ. कराटे स्टुडियोहरू गुणस्तरमा फरक हुन्छन्, र जबसम्म तपाईलाई थाहा छैन कि तपाई के गरिरहनु भएको छ यो उत्तम डील उपलब्ध नहुन सक्छ।? त्यहाँ सयौं छन् यदि कराटे प्रशिक्षकको सयौं छैन र तिनीहरूको गुणवत्ता व्यापक रूपमा फरक हुन्छ।? एक कराटे स्टुडियो किन्नको लागि दिमागमा राख्नको लागि तीन फरक सुझावहरूमा एक नजर राख्दछौं. 1.? कति लामो।? यो सुरुमा स्पष्ट नहुन सक्छ, तर कराटे स्टुडियो अस्तित्वमा रहेको समयको लम्बाइ तपाईंले सोच्नुहुन्छ भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ? किन त्यो छ?? किनभने धेरै कराटे स्टुडियो रेस्टुरेन्टहरू जस्तै छन्।? व्यक्तिहरू जसले रेस्टुरेन्ट खोल्दछन् सामान्य रूपमा राम्रो भान्सा हुन्छन्, र सायद सबै भन्दा राम्रो व्यवसाय मान्छे होईन।? केवल किनकि तपाईं ओलम्पिक खेलाडी हुनुहुन्छ मतलब यो होइन कि तपाईं एक राम्रो व्यापारी व्यक्ति हुनुहुन्छ।? त्यसो भए के यदि कराटे स्टुडियो एकदम नयाँ छ, यो एक लामो समय को लागी वरिपरि रहन को समस्याहरु, एकदम कम छ।? तर यदि कराटे स्टुडियो केही समयको लागि वरिपरि भएको छ।? तपाईं धेरै सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ, तिनीहरूसँग दीर्घ-अवधि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै. ? 2.? प्रशिक्षक।? प्रशिक्षक को हो?? के उनी वा उनी चिनिएको नाम हो??? कराटे स्टुडियोको श्रृंखलामा छ?? प्रशिक्षकले सबै फरक पार्छ।? राम्रो प्रशिक्षक खोज्नु भनेको सुनको सुनको टुक्रा खोज्नु जस्तै हो।? असल व्यक्तिहरू भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ, तर जब तपाईं तिनीहरूलाई फेला पार्नुहुन्छ, तपाईंले वास्तवमै तिनीहरूमा टाँस्नु पर्छ।? प्रशिक्षकलाई सोध्नुहोस् वा उसको योग्यता के हो र ऊ कति लामो समयदेखि कराटे अभ्यास गर्दैछ।? थोरै खुट्टा लामो काममा जान्छ. 3. स्थान।? के कराटे स्टुडियो तपाईंको घर बन्द छ?? के यो पहुँच गर्न सजिलो छ??? घण्टा के हो??? हात अघि यी सबै पत्ता लगाउनुहोस्।? तपाइँ यहाँ र त्यहाँ केवल कराटे पाठ लिनको लागि घण्टा ड्राइभि be हुन चाहनुहुन्न।? जबकि नजिक राम्रो छ, यदि वास्तवमै राम्रो प्रशिक्षक अलि अलिअलि-अलि मार्ग हो भने, यो पनि जाने राम्रो तरिका हुन सक्छ यो हिमशिलाको टुप्पो मात्र हो।? हाम्रो साइट द्वारा आउनुहोस् र आज कराटेको बारेमा सबै जान्नुहोस्. एक कराटे स्टूडियो उठाउने तीन चरणहरू.
3 कार्ड पोकर रणनीति
जब तपाईं 52२-कार्ड डेक भाँच्नुहुन्छ र--कार्ड पोकरको एक हात सम्झौता गर्नुहुन्छ, पहिलो रणनीति तपाईंलाई चाहिन्छ नियमहरूको दृढ समझ हो. बरु अन्य खेलाडीहरू विरुद्ध प्रतिस्पर्धा भन्दा, तपाईं डीलर विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ. तपाईंलाई डिलर भन्दा राम्रो हात चाहिन्छ (र कम्तिमा एक जोडी) जित्नु. तपाईंहरू प्रत्येकमा तीनवटा कार्डहरू छन्, र कार्डहरू प्रत्येक हात पछि फेरिएको हो. किनभने त्यहाँ सीधा बनाउने कम तरिकाहरू छन्3फ्लश भन्दा कार्डहरू, स्ट्रेट्स उच्च श्रेणी. ऐस उच्च वा कम छन्. तपाईं दुई शर्त बनाउन सक्नुहुन्छ: एन्टे र जोडी प्लस. यस Ante शुल्क हात गरीएको को लागी शुल्क लिएको छ. जोडी प्लस तपाईंको शर्त हो कि तपाईं एक जोडी वा उच्चको साथ एक हात प्राप्त गर्नुहुनेछ. तपाईंले दुबै दांव बनाउन आवश्यक छैन, तर तपाइँ कम से कम खेल मा रहन को लागी Ante शर्त छ. तपाईं ante जब तपाईं खेल शर्त Ante स्थान मा आफ्नो शर्त राख्नुहुन्छ. दुबै तपाईं र डिलर तीन कार्ड सामना गरीएको छ. तपाईंको अर्को निर्णय? के यी कार्डहरू तपाईं शर्त गर्न को लागी राम्रो छन् वा तपाईं तह पर्छ? गुना र ante गुमाउनुहोस्. शर्त र तपाइँ तपाइँको शर्त कि खेल तालिका को खेल स्थान मा ante बराबर राख्नुहोस्. Win र तपाइँ Ante र जोडी प्लस भुक्तान प्राप्त. खेलमा रहनको निम्ति डिलरसँग रानी हुनु पर्छ वा अझ उत्तम. यदि छैन भने, तपाईं आफ्नो ante मा भुक्तानी प्राप्त मात्र यदि यो पनि पैसा दिन्छ (1 लाई 1) ‘ र लामो तपाईंले फोल्ड नगरेसम्म. पहिले भुक्तानी – एक सिधा हुन्छ 1 लाई 1 भुक्तान. – तीन प्रकारको हुन्छa4 लाई 1 भुक्तान. – एक सीधा फ्लश एक हुन्छ5लाई 1 भुक्तान. पेयर प्लस पेआउट – एक जोडी हुन्छa1 लाई 1 भुक्तान. – फ्लश हुन्छa4 लाई 1 भुक्तान. – एक सिधा हुन्छ6लाई 1 भुक्तान. – तीन प्रकारको हुन्छa30 लाई 1 भुक्तान. – एक सीधा फ्लश एक हुन्छ 40 लाई 1 भुक्तान. तपाईंको रणनीतिलाई मद्दत गर्न यी सुझावहरू सम्झनुहोस्: – यदि तपाईंसँग रानी वा राम्रो छ भने, जोडी प्लस शर्त. यदि छैन भने, पट. – एक व्यापारी एक रानी प्राप्त हुनेछ 66% समयको. – घर एक छ 3.4% फाइदा.3कार्ड पोकर रणनीति
सुपर पॉकेट बाइकबाट इष्टतम प्रदर्शन
कुनै रेसरले तपाईंलाई प्रदर्शन गर्न सक्छ भनेर बताउन सक्छ, र त्यसपछि त्यहाँ प्रदर्शन छ. इष्टतम प्रदर्शन अन्तिम लक्ष्य हो, विशेष गरी सुपर पकेट बाइकबाट. तपाइँ सुपर पकेट बाइक बाहिर उत्तम संभव प्रदर्शन चाहानुहुन्छ, र त्यसो गर्नु त्यति गाह्रो कुरा होइन. त्यहाँ केहि आधारभूत सुझावहरू छन् जुन तपाईंको बाइकलाई शीर्ष निशान आकारमा रहन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ. तपाईको सुपर पाकेट बाइकलाई सुचारु रूपमा चलाउनको लागि सबै भन्दा आधारभूत नियमहरू मध्ये एक समान नियम हो कि तपाईले कुनै पनि सवारी चलाउन सजिलो पार्नु पर्छ।, मिनी बाइकबाट कार वा भ्यानसम्म: तपाईको ग्यास राम्ररी छनौट गर्नुहोस्. सुपर पकेट बाइकहरूको लागि, धेरै पेशेवरहरूले तपाईंलाई रेसि fuel ईन्धन प्रयोग नगर्न भन्नेछन्. यो मात्र सहयोग गर्दैन, यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ कि अन्य ईन्धनले गर्दैन. उच्च अक्टेन अनलेडेड पेट्रोलले उत्तम कार्य गर्दछ. कुनै पनि ग्यास स्टेशन जस्तै, पम्पहरू र मैदानको अवस्थालाई हेर्नुहोस्. यदि तिनीहरू नराम्रो देखिन्छन् र पानी वरिपरि उभिएको छ जहाँ ट्याक्सीमा ग्यास राखिन्छ, सडकको अर्को अर्को प्रयास गर्नुहोस्. निश्चित गर्नुहोस् कि तेल सहि मिश्रण गर्नुहोस्, पनि. मिश्रणहरू पत्ता लगाउनको लागि पर्याप्त सजिलो हुन्छ, र कार जस्तै समान तेल प्रयोग नगर्नुहोस्. यो जेब बाइकका लागि डिजाइन गरिएको छैन. मोटरसाइकल तेल किन्नुहोस्. दाँयामा सुपर पकेट बाइक तोड्नुहोस्. यसमा मुख्यतया सामान्य ज्ञान प्रयोग समावेश छ. ब्रेक अवधिको अवधिमा अधिकतम RPM मा तपाईंको बाइक चलाउनुहुन्न. त्यसले मोटरमा अनावश्यक तनाव राख्छ. औसतन यसले पेट्रोलको चार ट्यांक लिनेछ, पाँच सुरक्षित हुन, मा तपाईंको सुपर पकेट बाइक तोड्न. यस अवधिमा, बाइकलाई धेरै कडा धक्का नगर्नुहोस् – बच्चा यो एक बिट. ढिलो र स्थिर धेरै शाब्दिक दौड जित्ने नेतृत्व गर्नेछ. तपाईंको बाइकको सही उपचारको साथ साथ जाँदै छ, चिसो न चलाउनुहोस्. तपाईको सुपर पकेट बाइकलाई सुरूवात गरे पछि करीव पाँच मिनेट को लागी गरम गर्न दिनुहोस्. यसले मोटर र फ्लुइड्सलाई आफ्नो इष्टतम चलिरहेको तापक्रम ताप्न दिन्छ. तपाईं आफ्नो कार कहिले सुरु गर्नुहुन्न, जाडो बाहिर जब र बाहिर बन्द, त्यसो भए तपाईको बाइकको साथ त्यस्तो नगर्नुहोस्. यो चिसो चलाउनको लागि होइन! अन्तमा, तपाइँको सुपर पकेट बाइक जान्नुहोस्. के सामान्य छ जान्नुहोस्, र के छैन. जब यो सामान्य रूपमा चालित हुँदैन, वा यदि केहि पनि भने सामान्य भन्दा फरक लाग्छ, यसलाई बन्द गर्नुहोस् र समस्या के हो पत्ता लगाउनुहोस्. सकेसम्म चाँडो सबै मर्मत गर्नुहोस्, र मर्मत नभएसम्म बाइक पार्क गर्नुहोस्. सावधानीले तपाईंलाई लामो दौडमा धेरै पैसा बचत गर्नेछ. यी सुझावहरू पालना गर्नुहोस्, र तपाईं एक सुपर पकेट बाइकको मजा लिन सक्षम हुनुहुनेछ जुन यसको क्षमताको प्रत्येक औंससम्म जान्छ. सुपर पॉकेट बाइकबाट इष्टतम प्रदर्शन
विभिन्न मार्शल आर्टबाट एक किक आउट गर्दै, भाग 1
मार्शल आर्ट एक खेल हो जुन विभिन्न लडाईका बिभिन्न विधिहरूको संयोजन गर्दछ. केहि केसहरूमा, मार्शल आर्ट मात्र प्रयोगको लागि प्रयोग गरिन्छ, अन्य अवस्थामा; मार्शल आर्ट हेड-टू-हेड लडाईमा प्रयोग गरिन्छ, सामान्यतया नियन्त्रणित अवस्थाहरूमा, जस्तै खेलहरू वा कार्यक्रमहरू. किनभने मार्शल आर्टमा बिभिन्न शैलीहरू समावेश छन्, यो सामान्य छ जब एक व्यक्ति मार्शल आर्ट को बारे मा सोच्दछ, तिनीहरूले एक विशेष प्रकारको सोच्दछन्, उदाहरण को लागी, कराटे. यद्यपि, त्यहाँ केवल कराओके भन्दा मार्शल आर्टमा बढी छ. उदाहरणका लागि, कराटे कलाको एक स्ट्यान्ड अप शैली हो, जसमा कुंग फू, सान Shou, टाई क्वाउन गर्नुहोस्, वुशु, क्रे मगा, किकबक्सि।, र बक्सिंग पनि सम्बन्धित छ. जब यी जस्तो शैलीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, स्ट्यान्ड यू स्टाइल पनि भनिन्छ, रोक्दै, लात हान्दै, यो मार्शल आर्ट को रूप मा जब आउँछ पञ्चि प्रमुख फोकस हो. मार्शल आर्टको अर्को शैलीलाई ग्राप्लि। वा ग्राउन्ड फाइटिंग भनिन्छ. यो कुस्ती को रूप हो, यसमा ग्रीको रोमन कुश्तीको मार्शल आर्ट अभ्यासहरू सामेल छन्, साथी, गोली हान, शुटो, र ब्राजिलियन जुजिट्सु. अझै अर्को शैली भनेको स्ट्रोing्ग स्टाइल भनेको हो, जसमा एक विपक्षीले अर्कोमा ताल्चा प्रयोग गरी असंतुलित हुने प्रयास गर्दछ, ट्रिप्स, वा थ्रो गर्दछ. यस शैली भित्र, कला जस्तै Hapkido, Shuai Jiao, आइकिडो, र जुडो बस्छन्. हतियारमा आधारित मार्शल आर्टका लागि, यी कला हुन् हतियार प्रयोग गरेर प्रदर्शन, र धेरै जसो सांस्कृतिक र परम्परागत प्रदर्शनको समयमा मात्र प्रयोग गरिन्छ, जे होस् काली अझै पनि आत्म-रक्षा र लडाई को एक प्रयास को रूप मा प्रयोग गरीन्छ. यस कोटि बीचमा कलाहरू क्यान्डो समावेश गर्दछ, साइड, र काली. सबै मार्शल आर्ट शैलीहरू आज युद्धक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिदैन, यदि तिनीहरू मूल उद्देश्यका लागि डिजाइन गरिएको थियो भने पनि. अब, धेरै यसको सट्टा व्यायामको लागि प्रयोग गरिन्छ, तनावबाट छुटकारा, आन्तरिक उर्जा, र सास फेर्दै. यी मध्ये केहि ध्यान वा कम प्रभाव शैलियों ची गोंग को कला शामेल छ, बा गुआ, र ताई ची. विभिन्न मार्शल आर्टबाट एक किक आउट गर्दै, भाग 1
तपाईंको सर्वश्रेष्ठ खेल्नको लागि गोल्फको लागि फिट हुनुहोस्
गोल्फको लागि फिट एक शब्द हो जुन तपाईंले अब सुन्नु पर्दछ. यो सबै टेलिभिजनमा छ र अब एमेच्योर गोल्फहरू आफ्नो पूर्ण क्षमतामा पुग्न चाहनेहरूको साथ मुख्यधारा बनेका छन्. गोल्फकर्ताहरूले महसुस गरिरहेछन् त्यहाँ गोल्फ को एक फिटनेस घटक छ, र गल्फको लागि फिट हुनको लागि गम्भीरतासाथ विचार गर्दैछ. यो अक्सीमोरोन जस्तो लाग्न सक्छ, तर मलाई भन यदि तपाईले कहिल्यै आफैंमा गल्फ खेल्दा चोट पुर्‍याउनुभएको छ. कसरी तल्लो पछाडि तनावको बारेमा? वा, खेल पछि एक दुख्ने काँध? गोल्फ क्लब स्विing्गबाट ​​चोटपटकको सूची एक माईल लामो छ. यो कुराको रक्षा गर्दछ कि गोल्फ को लागी फिट हुनु एक oxymoron होईन, तर वास्तवमा यो एक आवश्यकता हो, यदि तपाईं निराशा समाप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, र खेल्नुहोस् जस्तो तपाईंलाई थाहा छ तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ. गल्फ एक भौतिक हो’ खेल कि शरीर मा एक भारी मात्रामा तनाव राख्छ. मांसपेशीहरू, अस्थिबंधन, tendons र joints ले मूल्य तिर्दछ यदि तपाइँको गल्फ मांसपेशिहरु मा स्विंग गर्न देखि ताकतहरु को सामना गर्न को लागी कडा छैन भने 100 मील प्रति घण्टा. त्यसबारे सोच्नुहोस्! तपाइँ एक स्विing3खुट्टा कार्यान्वयन सम्ममा 100 मील प्रति घण्टा, एक धेरै गतिशील शरीर स्थिति कायम गर्दा. यो शारीरिक रूपमा असम्भव छ जबसम्म तपाईं यी स्विing मेकानिकहरू प्राप्त गर्न मांसपेशीको शक्ति र लचिलोपना प्राप्त गर्नुहुन्न. राख्ने मा हेर्नुहोस्! तपाईंले प्राय: जसो अभ्यास मात्र गर्नुभयो 5-10 मिनेट र तपाइँको तल्लो पछाडि तपाइँ मार्दै थियो? तिमीलाई थाहा छ अपराधी के हो? कडा ह्यामस्ट्रिंगहरू र कमजोर तल्लो पछाडि. गोल्फहरु जो गोल्फ को लागी फिट छन् यो अनुभव गर्दैन. तिनीहरू एक घण्टा राख्न अभ्यास गर्न सक्छन् र यो महसुस गर्दैनन्. त्यो राम्रो हुने थिएन? कसरी गहिरो असह्य बाहिर हिट गर्ने बारेमा? कति चोटि तपाईंले बल छोड्नुभयो जहाँ यो थाल्यो जब तपाईं सुरु गर्नुभयो? वा यदि तपाईंले यसलाई अग्रिम गर्नुभयो भने, त्यस पछि तपाईंको नाडीले तिमीलाई मार्दै थियो? यदि तपाइँ गोल्फको लागि उपयुक्त हुनुहुन्थ्यो भने यस्तो हुने थिएन! तपाईंले तथ्यहरूमा एक नजर राख्नु पर्छ! गल्फ 'भौतिक' हो. गल्फले ठूलो शक्ति र लचिलोपन लिन्छ. गोल्फले आकारमा नरहेको शरीरको चोट पुर्याउँछ. गोल्फ निराश छ जब तपाईं आफ्नो चौरमा सबैभन्दा छोटो हिटर हुनुहुन्छ. गोल्फले तपाईंलाई बौलाहा बनाउँछ! पागलपन रोक्नुहोस् र गोल्फको लागि फिट हुनुहोस्! तपाईंको सर्वश्रेष्ठ खेल्नको लागि गोल्फको लागि फिट हुनुहोस्
एक राम्रो गोल्फ खेल को गुप्त
राम्रो गोल्फ खेल कुनै पनि गोल्यरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ. तपाईको उमेर के हो त्यसले केही फरक पार्दैन, तपाईं कति राम्रो खेलाडी हुनुहुन्छ वा कति समय तपाईं खेल्दै हुनुहुन्छ. तर राम्रो गल्फ खेलको कुञ्जी तपाईको सोचाइ नहुन सक्छ. 'मानक’ एक राम्रो गल्फ खेल गर्न को लागी पाठ लिइरहेको छ; अधिक उपकरण किन्न; र दायरामा सयौं गोल्फ बलहरूमा हिट गर्दै. यद्यपि, माथिको दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा गलत छैन जहाँ एक महत्त्वपूर्ण हराइरहेको तत्व छ. त्यो तत्व तपाईंको BODY हो! तपाईं ती फेन्सी क्लबहरू स्विंग गर्नुहोस्; तपाईं दायरा मा ती सबै बल हिट; र तपाई शारीरिक रूपमा पाठ लिने पक्षमा भाग लिनुहुन्छ. साधारण डिनोमिनेटर तपाईंको शरीर हो. के तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? यदि तपाईं गर्नुहुन्न भने, म तपाइँ किन सुन्नको कारणको स्पष्टीकरण सुन्न चाहन्छु. यदि तपाईं मलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ, र सोच्नुहोस् म टाढा टाढा नै सहि छु, त्यसो भए तपाईले आफ्नो शरीरमा राम्रो गोल्फ खेल खेल्न किन काम गर्नुहुने छैन? म सँधै गोल्फरहरू सुन्दै छु कि उनीहरूले पाठ लिएका छन्, नयाँ उपकरणहरू किन्नुभयो र सयौं बलहरू जोडे तर अझै सुधार भएको छैन. त्यो कथन हो! यसले केवल एउटा चीज छोड्छ. मलाई गलत नबनाउनुहोस् ’म दृढ रूपमा विश्वास गर्दछु कि तपाईंलाई गल्फ स्विंग टेक्निकको समझ चाहिन्छ, र गल्फ उपकरणहरूले मद्दत गर्न सक्छ. तर बल गोल मात्र यो गर्न को लागी तपाईंलाई एक राम्रो गोल्फ खेल खेल्न मद्दत गर्दैन. अब यो चित्रण गर्नुहोस्. तपाईं दैनिक केहि साधारण तान र गोल्फ व्यायाम गर्नुहुन्छ र खेल्न बाहिर जानुहुन्छ. अब तपाईंले महसुस गर्नुभयो तपाईं कम तनावको साथ ठूलो ब्याकसविंग बनाउन सक्नुहुन्छ; तपाईंसँग अधिक क्लबहेड गति छ तपाईं लामो ड्राइभमा हिट सक्षम बनाउँदै; र तपाइँ पछाडि नौ मा थकित छैन. तपाइँको समयमा न्यूनतम लगानीको लायक छैन? राम्रो गोल्फ खेल खेल्नको लागि तपाईंले हाल गरिरहनुभएको भन्दा फरक दृष्टिकोण लिनुपर्‍यो. एक जुन समस्याको जडमा पुग्छ. एउटा जुन ती मिशिटहरू र विसंगतहरूको कारण हो. तपाईं आफ्नो दृष्टिकोण मा चकित हुनेछ यदि तपाईं यो दृष्टिकोण अपनाउनुभयो भने. तपाईं अन्तमा राम्रो गोल्फ खेल खेल्नुहुनेछ. एक राम्रो गोल्फ खेल को गुप्त
पेन्टबल के तपाइँ लाभ चाहानुहुन्छ??
सबै भन्दा राम्रो गियर हुनु पेंटबल खेल्दा तपाइँको विपक्षीमाथि फाइदा लिन मद्दत गर्दछ. हल्का पोशाकहरू जस्ता साना चीजहरू, चश्मा, हेलमेट, पन्जा र निश्चित रूपमा तपाईको बन्दुक. यदि तपाईं आफ्नो पेन्टबल गम्भीरतासाथ लिनुहुन्छ भने तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि म के गर्दैछु. हल्का गियरको अर्थ अधिक गतिशीलता हो, बढी ऊर्जा र चलाख सोच. तर तपाईंले आफ्नो गियर सावधानीपूर्वक छनौट गर्नुपर्नेछ केही पेन्टबल गियर राम्रो देखिन्छ तर वास्तविक तथ्यमा तपाईंलाई सुस्त तुल्याउन सक्छ वा तपाईंलाई चोरी वा सटीकता प्रदान गर्न सक्दैन जुन तपाईं खेल जित्नुपर्नेछ।. कुन गियर तपाईको लागि सहि छ भनेर तपाई कसरी जान्न सक्नुहुन्छ. खैर यो सबै तपाइँको खेल खेल्ने स्तर द्वारा निर्धारण गरिन्छ यदि तपाइँ आधारभूत भाँडाको गियरको साथ एक शुरुआत हुनुहुन्छ. यो गर्नाले तपाईंलाई पेन्टबलसँग सम्बन्धित गियरको बारेमा राम्रो विचार दिन्छ. पहिलो पटक भाँडामा दिइएको पेन्टबल गियरको साथ खेल्दा तपाईंलाई जानकारी प्रदान गर्दछ जुन चीजहरूमा असजिलो हुन्छ, भारी वा केवल तपाईंलाई सही फिट गर्दैन. यो पेन्टबल गियर र खेल खेल्ने तरिकाको बारेमा पत्ता लगाउने एक उत्तम तरिका हो. अनुभवी खेलाडीहरू जान्दछन् कि पेन्टबल गनहरू एक महत्त्वपूर्ण कारक हुन्. मूल्य सयौं देखि हजारौं डलर को लागी हुन सक्छ. त्यसो भए हामी पेन्टबल गनको बारेमा कुरा गरौं त्यहाँ बजारमा सयौं विभिन्न बन्दुक छन् तर कुनले तपाईंलाई ठूलो फाइदा दिन्छ. स्पष्ट रूपमा हल्का बन्दुक राख्नुले तपाईंको गतिशीलता बढाउनेछ तर बन्दुक ब्यारेलको लम्बाइ के हुन्छ? मेरो विचारमा तपाईको पेन्टबल गनको आदर्श लम्बाई वरपर हुनुपर्दछ 8 लाई 14 एक ब्यारेल भएको इन्चले अब कुनै पनि सुविधाहरू प्रदान गर्दैन. यो तपाइँलाई अधिक सटीकता प्रदान गर्दैन, गतिशीलता धेरै कठिन बनाउँछ र निस्सन्देह यो बन्दूक आफैं भारी हुनेछ. पेन्टबल गन फेला पार्दा तपाइँको समय लिनुहोस् अन्य खेलाडीहरूलाई सोध्नुहोस् कि कुन बन्दूक उनीहरू त्यहाँ खेल शैली को लागी सबैभन्दा राम्रो मन पर्छ. सही गियरले जीत र पराजितको भिन्नता भन्न सक्दछ तर सुरक्षाको लागि अधिक महत्वपूर्ण हुन्छ. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई राम्रो सुरक्षा गियर पाउनुहुन्छ. तपाईको सुरक्षा गियर तपाईको शरीरमा फिट हुनुपर्दछ आरामसंगै पेन्टबल गियर हराउनु खतरनाक हुन सक्छ विशेष गरी चश्मा र तपाईको हेलमेट. त्यसैले यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफैंको रक्षा गर्न सही गियर फेला पार्नुभयो र तपाईंको विपक्षीलाई उत्तम सम्भावित फाइदा दिनुहोस्, तर कृपया याद गर्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस्!! तपाइँको, हरेक खेल जित्ने छैन, यो एक टोली खेल हो तपाई आफैले यसलाई जित्न सक्नुहुन्न. म तपाइँ र तपाइँका साथीहरूलाई तपाइँको अर्को पेन्टबल खेल अनुभवमा सर्वश्रेष्ठ चाहान्छु र आशा गर्दछु कि तपाइँ एड्रेनालाईन भीड खेल्दै पेन्टबल प्रदान गर्नुहुन्छ।. पेन्टबल के तपाइँ लाभ चाहानुहुन्छ??
KY मा रक क्लाइम्बिंग क्षेत्र ‘ केन्टकी
पहिलो हेराईमा, केन्टकीमा रक क्लाइम्बिaटाढाको विचार जस्तो देखिन्छ. यसको विपरितमा! रातो नदी घाटीले KY मा रक क्लाइम्बि areas क्षेत्रहरू प्रदान गर्दछ. KY मा रक क्लाइम्बिंग क्षेत्र ‘ केन्टकी डेनियल बुन राष्ट्रिय वनमा अवस्थित छन्, अधिक लाल रेड नदी घाटी क्षेत्र सकियो 26,000 एकर. रातो नदी लगभग करीव चलाउँछ 20 क्षेत्र को माध्यम मा मील. नदीको वरपरको क्षेत्र बहु-पिच पर्खालहरूको साथ चट्टान चढ्ने अवसरहरूको साथ राम्रो छ, बोल्डरहरू र पर्वतारोहण कौसीहरू तपाईको अधिक ठाडो प्रविधिको प्रयास गर्न. रातो नदी घाटी लेक्सिंगटनबाट करिब एक घण्टामा कारमा पुग्न सकिन्छ, कि. ट्रेल र शिविर क्षेत्रमा प्रशस्त छन्, ताकि तपाइँ तपाइँको यात्रा को एक सप्ताहन्त बनाउन सक्नुहुन्छ. रक क्लाइम्बिलाई धेरै घाँसहरूमा पारेर अनुमति छ, तर केहि क्षेत्रहरू सीमित छन्. तपाईं सूचीको लागि वन रेन्जरहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं सामान्यतया आरोह को कुनै मा चढाई वा ओर्लिन प्रतिबन्धित छन्. पनि, सबै मार्गहरू पूर्व-सेट गरिएका छन् र रक पर्वतारोहीहरू नयाँ रूटहरू सुरू गर्न वर्जित छन् रेंजर्सबाट पहिले अनुमति लिईकन. Downer को लागी माफ गर्नुहोस्, तर तपाईं पक्राऊ हुन चाहनुहुन्न. जब रेड नदी घाटीमा चट्टान चढ्ने, त्यहाँ केहि क्षेत्रहरू छन् विश्वव्यापी औंठा माथि माथि. परम्परागत आरोहणको लागि, निम्न क्षेत्रहरू औंठा माथि जान्छन्: 1. पेबल समुद्र तट 2. स्काई ब्रिज रिज 3. गढी 4. लामो पर्खाल यी क्षेत्रहरूमा सबैसँग राम्रा with भन्दा राम्रा रेटिंगसहित महाकाव्य आरोहण मार्गहरू छन्. खेलकूद आरोहणले बिल्कुलै फरक चुनौती प्रस्तुत गर्दछ र रेड रिभर गोर्गे क्षेत्रले यसलाई भेट्छ. शीर्ष क्षेत्रहरू सामेल छन्: 1. बहुउद्भूत आरोहण सहित ग्लोबल गाउँ 2. सैन्य पर्खाल 3. रोडसाइड क्र्याग 4. पेबल समुद्र तट 5. स्काई ब्रिज रिज यदि तपाईं क्षेत्रमा नयाँ हुनुहुन्छ, हिट गर्न सबै भन्दा राम्रो दुई स्थानहरू पेबल बिच र स्काई ब्रिज रिज हुन्. प्रत्येकले विभिन्न प्रकारका आरोहण प्रदान गर्दछ, जसले तपाइँलाई तपाइँको प्रविधिको प्रयास गर्न र केही चुनौतिहरूको सामना गर्न उत्तम अवसर प्रदान गर्दछ. केन्टकीमा अन्य क्षेत्रहरू छन् जुन ठोस चट्टान चढ्ने प्रस्ताव गर्दछ. रातो नदी घाटी, यद्यपि, KY मा रक क्लाइम्बि areas क्षेत्रहरूको कुरा आउँदा पहाडको राजा हो. KY मा रक क्लाइम्बिंग क्षेत्र ‘ केन्टकी
फलामको पाम भाग 4
आइरन पाम Q बाट जारी&सिगुung रिचर्ड क्लियर पार्टको साथ3म तुरुन्तै गए र यस बारे टायरोनलाई सोधे. उहाँ केवल एक बताउने तरिकामा मुस्कुराउनुभयो र भन्नुभयो 'नतोड्नुहोस्, बस अभ्यास गर्नुहोस् '. तब मैले महसुस गरें कि उसले मलाई थरथराहने हथेली र सतहलाई नोक्सानी नगरी वस्तुहरू मार्फत कसरी ऊर्जा सार्न सिकाइरहेको थियो. म वास्तवमै उत्साहित भएँ र हामी एउटा पुरानो सानो टुक्रा पार्ने प्रक्रियामा छौं3कोठा गेस्ट हाउस जुन हाम्रो पछाडिको आँगनमा बसिरहेको थियो. मैले कति टाढा परियोजना गर्न सक्छु भनेर हेर्नका लागि मैले घरको टाइलहरू प्रहार गर्न शुरू गरें. एक बिन्दुमा मैले घरको अगाडि हिर्काएँ र पछाडि एउटा झ्याल भाँचे. मैले घरको प्रयोग गर्न सुरु गरें यदि मैले चाहेको दिशामा उर्जाको यात्रा गर्न सकें र मैले त्यसमा केही सीप प्राप्त गर्न सक्षम भएँ।. जब मैले टायरोनलाई भने उसले निन्दा गर्यो (थोरै रिसाए) र भने, 'भंग नगर्नुहोस्, बस अभ्यास गर्नुहोस् '. म अझै पनि अवसर मा भाँचे तर मलाई यो लाग्यो कि उहाँ हाम्रो हातहरुलाई यति राम्रोसँग प्रोजेक्ट गर्न को लागी प्रशिक्षित गर्न चाहानुहुन्छ कि एक झटका विनाशकारी नतिजा हुन सक्छ यदि हामी हाम्रो कला को उपयोग गर्न को लागी गर्छ भने।. आज म केवल चीजहरू जाँच्नको लागि बाहिर जान्छु वा जब म प्रदर्शन दिन्छु वा यदि मैले एकदम विशिष्ट सीप सिकाइरहेको छु जहाँ विद्यार्थीले अपेक्षा गरेको कुरा हेर्नु पर्छ।. मेरो विश्वास छ टायरोनले गरे कि यो दीर्घकालीन स्वास्थ्यको लागि उत्तम छ. हाम्रो कुung्ग फूलाई लडाईमा प्रयोग गर्न टायरोनले यस धारणालाई ग्रहण गर्यो कि यदि हामीले कसैलाई पनि यो चोटबाट जोगिन सकेनौं भने चोट पुर्‍याउने कोसिस गर्नु हुँदैन तर उसलाई धेरै सचेत थियो कि हामी ज्यादै हिंस्रक र अपराधले भरिएको औद्योगिक सहरमा थियौं जहाँ सम्भावना बढी थियो। हाम्रो बाँच्नका लागि सीपहरू प्रयोग गर्नु पर्छ. जारी राख्नको लागि ‘आइरन पाम भाग।’’ फलामको पाम भाग 4
युवा बेसबल ब्याट्स – एक द्रुत प्राइमर
यस्तो लाग्छ कि यस्तो सरलको लागि, बेसबल ब्याट जस्तो एकल उद्देश्य उद्देश्य, यो तपाइँको एथलेटिक छोरा वा छोरी को लागी एक किन्न सजिलो हुनेछ. तर सत्य यो हो, त्यहाँ बेसबल ब्याट को सबै प्रकार छन्. नडराउनुहोस्, निम्नलिखित मूल कुराले तपाइँको छोरा वा छोरीको चाहानालाई निश्चित शट बेसबलमा ब्याट गर्नको लागि सही दिशामा मार्गदर्शन गर्दछ. आधिकारिक लीगमा, युवा बेसबल ब्याट कहिलेकाँही परम्परागत र काठका हुन्छन् तर प्राय: जसो हुँदैन, तिनीहरू एल्युमिनियम छन्. १ 1970 ’s० को दशकसम्म एल्युमिनियम ब्याटहरू वास्तवमै प्रस्तुत गरिएको थिएन र यी युवा बेसबल ब्याटहरू सानो छन्, हल्का, तर धेरै धेरै शक्तिशाली, तिनीहरूको काठ समकक्षहरू भन्दा. त्यसोभए जब तपाइँको बच्चाको बेसबल ब्याटको लागि किनमेल गर्ने, पहिले उनीहरूको लिगको लागि कस्तो प्रकारको ब्याट चाहिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नुहोस् र त्यसपछि कुन लम्बाई र चौडाइ उपयुक्त छ भनेर निर्धारण गर्नुहोस्. त्यस पछि, यो ज्यादातर शरीरको संरचना र स्विंग गतिमा बल्ला शरीर संग कसरी कुराकानीको बारेमा छ. लामो ब्याटमा त्यो बल हिट गर्ने राम्रो मौका छ, तर हल्का ब्याट, जति शक्तिशाली पालेको स्वि sw हुन्छ र बल छिटो र टाढा जान्छ! पनि, बेसबल ब्याटमा बाक्लो ब्यारेलको अर्थ बढी शक्तिशाली हिट हुन सक्छ, तर एकै समयमा यसले ब्याटलाई तौल गर्नेछ. यो सबै तपाइँको मनपर्ने ब्याटि style शैलीमा तल आउँछ. त्यहाँ बाहिरको सर्वश्रेष्ठ मूल्यहरूका लागि, वेबमा युवा बेसबल ब्याटहरू तपाईंको स्थानीय खेल उपकरण स्टोरहरूको साथ वेबमा तुलना गर्नुहोस् – तपाईं सामान्यतया धेरै पैसा अनलाइन बचत गर्न सक्नुहुनेछ. पनि, किनकी तपाईंलाई स्टोरमा बेसबल ब्याट स्विंग गर्न अनुमति छैन, कहिलेकाँही ब्याटि range दायरामा बिभिन्न बल्लसँग अभ्यास गर्नु बेस बेसबलको छनौट गर्नु राम्रो तरिका हो. युवा बेसबल ब्याट्स – एक द्रुत प्राइमर
ब्रायन कोप्सको 1-70 स्तर गाईड समीक्षा – राम्रो वा नराम्रो?
मैले यो ब्रायन कोपको पोस्ट गर्ने निर्णय गरें 1-70 गाईडले के गर्न सक्दछ पहिले हेन्डिंग गाइडले के गर्न सक्दछ भन्ने हेराई पछि गाईड समीक्षालाई समतल गर्दै. यदि तपाईं परिश्रमबाट टाढा हुनुहुन्छ, अन्ततिर कुनै चीज हिट गर्न बीचमा चीजहरू मार्दै 70, तपाईंले विशेष चासोको यो समीक्षा फेला पार्नुहुनेछ. यस संक्षिप्त समीक्षामा म तपाईं जानु पर्ने के तपाईं गाइड बाट आशा गर्न सक्नुहुन्छ, साथ साथै या भए पनि मलाई यो लाग्दैन कि यो तपाईंको स्तर बढाउने एक प्रभावकारी तरीका हो. आशा छ, यो पढिसके पछि तपाईंसँग राम्रो विचार हुन्छ यदि यदि गाईड तपाईंको पैसाको लायक हो भने. यदि तपाईं वारक्राफ्टको विश्वमा हुनुहुन्छ भने, तपाइँ जान्नुहुन्छ कि कुनै स्तरमा पठार पनी कति निराश हुन सक्छ. चाहे तपाईंलाई पुग्न समस्या भइरहेको छ 17 वा 70, ब्रायन कोप्सलाई यहाँ मद्दत गर्न यहाँ छ 1-70 स्तर गाईड. उहाँ तपाईंलाई कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ देखाउन सक्नुहुन्छ 70, एक पछि अर्को, तपाईले सोचेको भन्दा कम कामको साथ. अब तपाईं कानूनी रूपमा कुनै पनि सर्भरमा तपाईंको लेबलिंग समय हावी गर्न सक्नुहुन्छ! सबैजनालाई थाहा छ कि Warcraft को संसार खेल्न को लागी रमाईलो छ. घण्टा पिंध्नु रमाईलो हुँदैन, तर खोज छ. क्वेस्टिंग पनि स्तरमा छिटो तरिका हो, साथीहरू प्राप्त गर्नुहोस् र मनोरन्जन गर्नुहोस्. ब्रायन कोप्समा 1-70 स्तर गाईड, तपाइँ सबै मार्गमा एकल गर्न सक्षम हुनुहुनेछ 70 कुनै पनि जाति वा वर्ग प्रयोग गर्दै. डिजिटल 115 पृष्ठ मार्गनिर्देशनले तपाईंलाई कहिले क्वेस्टहरूमा स्वीकार / घुम्ने कुरा बताउँछ, कहाँ जाने र अधिक ताकि तपाईं सजिलैसँग कुनै पनि एलायन्स क्वेस्टको साथ अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ. धेरै टाढा बाट, गाईडको बारेमा सब भन्दा राम्रो कुरा अन्तर्क्रियात्मक नक्शा हो जुन तपाईंलाई खुलासाउनु अघि सबै देख्न अनुमति दिन्छ. मामला मा तपाईं सोच थिए, गाईड पनि छ 100 प्रतिशत कानूनी र तपाइँ प्रतिबन्धित हुँदैन किनकि यसले कुनै ह्याकहरू प्रयोग गर्दैन, बट्स वा धोखा दिन्छ. ब्रायन कोपको कति फरक छ म भन्न सक्दिन 1-70 लेवलिंग गाईडले तपाईको व्राफ्ट्राफ्ट खेलमा खेल्नेछ. म यो अत्यधिक सिफारिस गर्दछ कि जो एक को लागी दर गर्न को लागी र तपाइँको साथीहरु र प्रतिस्पर्धा लाज हुनेछ. ब्रायन कोप्सको 1-70 स्तर गाईड समीक्षा – राम्रो वा नराम्रो?
10 महिलाको लागि शक्तिशाली आत्म रक्षा सल्लाह
अमेरिकामा, प्रत्येक दुई मिनेट एउटी महिलालाई बलात्कार भइरहेको छ. A 1993 सर्वेक्षणले यो कुरा पत्ता लगायो 50% क्यानाडाली महिलाहरूले यौन दुर्व्यवहार वा शारीरिक हिंसाको घटना अनुभव गरेका छन्. अष्ट्रेलियामा, 19% वृद्ध महिला को 18 लाई 24 पछिल्लो वर्ष हिंसाको एक कार्यको अनुभव गर्नुभयो. तथ्या show्कले देखाउँदछ कि अमेरिकामा धेरै चार मध्ये एक महिला उनको जीवनकालमा यौन उत्पीडन हुनेछ. यी शकिंग तथ्या .्कहरू हुन्! भन्दा बढीको लागि 30 बर्षदेखि म विशेष आत्म रक्षा कोर्स र सेमिनार चलाउँदै छु. त्यस समयमा मैले हजारौं व्यक्तिहरूलाई कसरी सुरक्षा दिने र आफैंको देखभाल गर्ने देखाइएको छ. बढ्दो व्यक्तिगत सुरक्षा सँधै जागरूकता संग शुरू. सबै भन्दा धेरै महिलाहरु केहि भन्दा अधिक यौन प्रकृति को आक्रमण डर मेरो सबैभन्दा द्रुत सुझावहरु को लागी गरीएको छ. यदि तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ, यहाँ दश साधारण चीजहरूको सूची छ जुन तपाईं तुरून्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको सुरक्षा बढाउनेछ: 1 – सार्वजनिक ठाउँमा खुला कपडा लगाउने नगर्नुहोस्. त्यसो गर्नाले तपाईको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा निश्चित हुन्छ, दुष्ट मनसाय भएका ती मानिसहरूलाई ध्यान दिएर. असक्रिय हुनुहोस् र उत्तेजक पोशाकलाई ती समयमा छोड्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो पार्टनरको आत्मीयताको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ.2– आफ्नो सहज ज्ञान ट्रस्ट गर्नुहोस्. महिला धेरै सहज छन्. यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि परिस्थिति खतरनाक हुन सक्दछ भने त्यस्तो हुन सक्छ. त्यो सानो अभिभावक स्वर्गदूतलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टामा भरोसा गर्नुपर्दछ.3– बलात्कार र अन्य यौन दुर्व्यवहार जहिले पनि बढ्दो छ. सबैभन्दा खराब नतिजाको घटनामा तपाइँको औंठा नailsहरू तपाइँको आक्रमणकर्ताको गालमा गेज गर्न प्रयोग गर्नुहोस्. यसले उसलाई पहिचानको लागि चिह्नित गर्दछ र तपाईंसँग आफ्नो न nails मुनि डीएनए हुनेछ.4– शिष्ट तरीकाले तपाईंको मोटर वाहन ड्राइव गर्नुहोस्. रूखो हात चिन्हहरूको कसैले पनि कदर गर्दैन. सम्झनु – अन्तत: तपाईले रोक्नु पर्छ, यो ईन्धन को लागी छ भने पनि. साइको केस धेरै माईल को लागी तपाइँ पछ्याउन सक्छ “केवल तपाईलाई पाठ सिकाउन” – सबै किनभने तपाईंले आफैलाई तिनीहरूको मु tw्गाएको दिमागको लक्ष्य बनाउनुभयो.5– अत्यधिक मात्रामा रक्सी पिउनु, मन परिवर्तन गर्ने ड्रग्स लिने र कुनै पनि खाना वा बेवास्ता गरिएको ठाउँमा छोड्दा यो छेडछाड हुन सक्छ विपत्तीको लागि एक विधि हो. तपाईको आत्मलाई एक अवसर दिनुहोस्.6– कहिल्यै पनि हिच्र-हाइकर्सहरू लिनुहोस् र आफैलाई होचो-बढ्ता कहिले पनि लिनुहोस्.7– यदि तपाईं एक्लै बस्नुहुन्छ भने निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सबै मेल तपाईंको पहिलो थर पछाडि तपाईंको उपनाम द्वारा सम्बोधन गरिएको थियो. मिसलाई जस्तो अभिवादनको साथ कहिले तपाईंलाई मेल ठेगानालाई सम्बोधन गर्न अनुमति नदिनुहोस्, श्रीमती, सुश्री वा तपाईंको क्रिश्चियन वा दिइएको नामको साथ. ती अक्षरहरू र पार्सलहरू धेरै आँखा तपाईं अघि लाग्न पास हुन्छ. तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्नुहोस्. तपाइँको सेक्स र वैवाहिक स्थिति को रूप मा उनीहरुलाई nondescript बनाउनुहोस्. किन तपाईको बारे कसैलाई पनि एक अतिरिक्त डेटा को लागी जानकारी को लागी अनुमति दिन्छ? 8 – कहिल्यै राती वा कुनै पनि समय एक्लो ठाउँहरूमा एक्लो हिड्दैन. शिकारीहरूलाई यी स्थानहरू मनपर्दछ. तिनीहरूबाट अलग रहनुहोस्.9– धेरै यौन कार्यहरू पीडितलाई चिनेका मानिसहरूले गरेका छन् – वा, कमसेकम, तिनीहरूले थाहा छ लाग्यो! मित्रैलो र सबै तरिकाले विनम्र हुनुहोस् तर बताउने कथनका संकेतहरूका लागि सतर्क रहनुहोस् “अनौंठो” व्यवहार. फ्लर्ट नगर्नुहोस्. कुनै पनि अनावश्यक ध्यान बारे दृढ रहनुहोस्, विशेष गरी काम गर्ने ठाउँमा. 10 – यौन आक्रमण सामान्यतया केही दृश्य साइनको अघि हुन्छ, जुन सामान्य रूपमा शारीरिक कार्य अगाडि केही मौखिक दृष्टिकोण द्वारा अगाडि हुन्छ. अनुक्रम चिन्नुहोस्: त्यो हेराई – कुराकानी – आक्रमण. कृपया तपाईको ख्याल गर्ने प्रत्येक महिलालाई यो सुरक्षा सूची वितरण गर्न नहिचकिचाउनुहोस्. मात्र शर्त यो छ कि संसाधन बाकस अक्षुण्ण छ र यो लेख कुनै पनि हिसाबले परिवर्तन गरिएको छैन. त्यहाँ धेरै सिकारीहरू छन्. हाम्रो महिलालाई सहयोग गरौं सुरक्षा आफैं! कसैलाई तपाईले चिन्नु हुन्न अर्को शिकार बन्न नदिनुहोस्. 10 महिलाको लागि शक्तिशाली आत्म रक्षा सल्लाह
रेक्स ग्रॉसमैन : 2003 ड्राफ्ट डे पिक्सहरू
रेक्स ग्रॉसमैन अगस्त मा जन्म भएको थियो 23, 1980 Bloomington मा, इन्डियाना. एक कम उमेर मा यो स्पष्ट थियो कि Grossman एक महान क्वार्टरब्याक हुन गइरहेको थियो. उनीसँग यस स्थितिमा उत्कृष्ट हुनको लागि मात्र सीपहरू थिएन, तर उसको मानसिक क्षमता पनि थियो. ग्रोसम्यान हाई स्कूल मा एक सफल भएकोले निराश छैन, कलेज, र फुटबलको व्यावसायिक स्तर. ग्रोसम्यानले ग्रेड स्कूलमा हुँदा फुटबल खेल्न सुरु गरे र छैठौं कक्षामा पुग्दा उनी पूर्ण समय क्वार्टरब्याक थिए. जबकि ब्लूमिंगटन हाई स्कूल साउथ ग्रोसम्यानको राम्रो क्यारियर थियो. जब सबै कुरा गरिएको थियो र भयो उसले अधिक भन्दा बढि फ्याँक्यो 7,500 गज र 97 टचडाउनहरू. यो एक वरिष्ठ सिजन द्वारा कैप गरिएको थियो जसमा उनी पारित भएका थिए 44 टचडाउनहरू, जसमा एक खेल समावेश छ जहाँ उसले छ छ थियो. ग्रोसम्यानले आफ्नो टीमलाई इण्डियाना राज्यको बखत A ए राज्य च्याम्पियनशिपमा नेतृत्व गरे 1998 मौसम. उच्च माध्यामिक विद्यालय पछि ग्रसमम्यानले आफ्नो खेल फ्लोरिडा विश्वविद्यालयमा लिने निर्णय गरे. यद्यपि उसको कलेज क्यारियर ढिलो सुरु भयो, चाँडै ऊ चीजहरूमा बसोबास गर्न थाले केहि थोरै देखि हेर्न थाल्छ. फ्लोरिडा मा उनको क्यारियर को दौरान Grossman स्कूल र सम्मेलन मा दुबै धेरै कीर्तिमान बनाए. यसमा पासर रेटिंग समावेश छ 146.77 उनलाई दक्षिणपश्चिमी सम्मेलनको इतिहासमा तेस्रो सबैभन्दा शक्तिशाली पासरको रूपमा सूचीमा राख्दै. उसको कलेज क्यारियर को लागी ग्रॉसमैन ठूला भयो 9,164 गज र 77 टचडाउनहरू. मा तिनीहरूको पहिलो पिकको साथ 2003 एनएफएल ड्राफ्ट शिकागो बीयरले ग्रोसमन चयन गर्‍यो. यद्यपि ग्रोसम्यानले आफ्नो प्रारम्भिक क्यारियरको धेरै संघर्ष गरेको थियो, उनले अन्तमा कदम चाले 2006 भालुहरूलाई सुपर बाउलमा पुर्‍याएर. जबकि ग्रॉसम्यान र भालुहरू स्टिकको हराउने अन्त्यमा घाइते भए, यसले प्रशंसकहरू र टीमलाई देखायो कि ऊ एनएफएलमा सुरूवात गर्न सक्षम छ. रेक्स ग्रॉसमैन : 2003 ड्राफ्ट डे पिक्सहरू
विश्व मा लोकप्रिय खेल.
पेन्टबल एक चरम खेल हो जुन राष्ट्रव्यापी हजारौं खेलाडीहरू छन्. त्यहाँ दश भन्दा बढि संगठनहरू छन् जुन देश भर बिभिन्न ठाउँहरूमा कार्यक्रम प्रायोजित गर्दछ. यद्यपि यस खेलका आविष्कारकहरूले यसलाई केवल रमाइलोको लागि सिर्जना गरे, यो खेल बढेको छ. भर्खरको सर्वेक्षणले देखायो कि यो विश्वमा तेस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय खेल हो. यस खेल खेल्न चाहनेहरूको लागि सुरक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिन्ता हो. यो कपडाबाट जान्छ कि हतियारहरूको प्रकारहरूमा लगाउन सकिन्छ जुन प्रयोग गर्न सकिन्छ. सुरक्षात्मक उपकरणहरूमा अनुहारको मास्क हुन्छ, पन्जा, छातीको लागि प्याडहरू, घुँडा र कुहिनो. ती मैदानको भित्री समयमा सबै ठाउँमा लगाउनुपर्दछ. रबरको तलवाहरू भएको जुत्ता लगाउन सल्लाह दिइन्छ जुन खेल सामान्यतया खेल्दछ. बन्दुकहरू कुनै पनि खेलहरूमा प्रयोग गर्नु अघि निरीक्षण गर्नुपर्नेछ. यो किनभने त्यहाँ अधिकतम वेग अनुमति छ. पेन्टबलहरू माथि यात्रा गर्नु हुँदैन 300 फुट प्रति सेकेन्ड अधिक केहि अधिक गम्भीर रूपमा खेलाडीलाई चोट पुर्‍याउन सक्छ. गलतफाइरिiring हुनबाट रोक्नको लागि, ब्यारेल प्लगहरू बन्दूक मालिक र घटनाको क्रममा उपस्थित व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ. अनुहारको मास्क अचानक कार्यको गर्मीको समयमा झर्छ. यो पसीनाले पनि कुहाउन सक्छ, रंग र फोहोर. जब यो हुन्छ, खेलाडीले रेफरीमा कल गर्नुपर्दछ ताकि यो मैदानको बाहिर सफा होस्. विपक्षीलाई खेलाडीमा गोली हान्न अनुमति छैन जबसम्म त्यो व्यक्ति फायरि zone क्षेत्रमा फर्कन तयार हुँदैन. यो खेल रमाइलो को बारे मा छ, खेलाडीहरूलाई अरू खेलाडीहरूलाई सराप दिन वा हिट गर्न अनुमति छैन. अनुमति दिइएको मात्र गतिविधि विपक्षीलाई गोली हान्नु हो ताकि ऊ अन्त्य हुने छ. खेलमा अनुमति दिइएको अर्को सुरक्षा सुविधामा विपक्षी खेलाडीलाई आत्मसमर्पण गर्ने अवसर दिनु समावेश छ; तर खेलाडीले प्रतिकूल कार्यको कुनै पनि रूप देखाउनु पर्छ, त्यसो भए एउटासँग विपक्षीलाई गोली हान्नको विकल्प हुँदैन. खेलाडीहरूलाई दिइएको सुरक्षा बाहेक, त्यस्ता घटनाहरूका आयोजकहरूले पनि वरपरका सुरक्षा जालहरू लगाउँदछन् र दर्शकहरूलाई कुनै पनि बलबाट हिर्काउनबाट जोगिन कार्यबाट एक निश्चित दूरीमा रहन आवश्यक गर्दछ।. सुरक्षा पेन्टबल र प्रायः सबै अन्य खेलहरूको प्राथमिक चिन्ता हो: यसैले नियमहरू ठाउँमा सेट गरिएका छन् जुन खेलाडीहरूले पालना गर्नुपर्छ. यो दुबै खेलाडी र फ्यानहरूलाई बचाउनको लागि गरिन्छ: घाइते हुनबाट बचाउन र ताकि सबैलाई राम्रो समय आउन सकोस्. विश्व मा लोकप्रिय खेल.
रुसियामा फ्लाइ फिसि।
केही वर्ष पहिले, मैले साइबेरियामा एक वर्ष बिताएको थिएँ र टिंडा भन्ने सहरमा जाने मौका पाएँ. मेरो आश्चर्यको लागि धेरै, स्थानीयका एक जोडीले मेनूमा माछा मार्दै थिए. साइबेरियाई आश्चर्य शब्द "साइबेरिया" उल्लेख’ र धेरै व्यक्तिहरू अन्धकारको कुरा गर्छन्, फ्रिजन्ड टुन्ड्रा सयौं माईलसम्म फैलिएको. राम्रो, यो जाडो या अधिक कम हो. गर्मी मा, यद्यपि, साइबेरियाको धेरै जसो साला र नब्बे को दशकमा तापमान संग हरियो को एक फुट छ. म सर्टहरू ल्याउन असफल भएको थियो, यो मेरो लागि अचम्मको कुरा थियो. चिता शहर मा बस्ने, मैले टिन्डाको वन शहर घुम्ने अवसर पाएँ. टिंडा बैकल तालको पूर्वतिर एक दिन पूर्व अवस्थित छ र काठको शहरको रूपमा काम गर्न १ 50 s० को दशकमा निर्माण गरिएको थियो. कम्युनिष्ट सरकारले हतियारपूर्वक एक लाख मानिस बसाई सरेका छन र आज पनि तिनीहरू त्यहीं छन्. टिंडा वरपरको क्षेत्र धेरै हिमाली र धेरै सुन्दर छ. जाडो को घाँस पगाल्दा, नदाहरु, ताल र खालका जीवनहरू हुन्. टिंडामा हुँदा, मलाई बस्ने मानिसहरूका छोराहरूसँगै माछा मार्ने निम्तो दिइयो. हिलर्याटी पक्कै पक्का थियो किनकी उनीहरूले अ no्ग्रेजी बोलेनन र म रूसी भाषामा कन्डरगार्टनको स्तरमा प्रवाहित थिए. बन्द हामी स्पष्ट स्थानीय तातो स्थान मा टहल्यौं. पछि 45 मिनेट पैदल, हामी एक ढिलो चलिरहेको क्रिकमा आइपुग्यौं जुन तपाईंलाई वायोमिंगमा फेला पार्ने चीज जस्तो देखिन्थ्यो. रूखहरू हामी माथि टावर गरियो र पानीमा छायाहरू कास्ट गर्नुहोस्. पानीको उथल पोखरीहरू किनारमा गठन भयो र मैले कसम खानु सक्छु मैले हाम्रा चिप्लो साथीहरू भन्दा बढी देखेको छु।. प्रत्येक व्यक्तिलाई थाहा छ, कुनै पनि चीजमा पहिलो टाइमरसँग सधैं सफलता हुन्छ. केटाहरूले सयौं पटक यस ठाउँ माछा पक्रेका थिए, तर मसँग थिएन. सबै द्वारा ब्रह्माण्ड मा राम्रो छ, मैले समात्नु पर्छ 20 तिनीहरूले केही पक्रन सकेनन्. काला, नराम्रो दिन थियो. मैले केहि पनि समातिन, केहि छैन, zippo. निकोली र ओलेग, अर्कोतर्फ, फिशर कुहिनो पाउँदै थिए. यद्यपि उनीहरूले धेरै माछा समात्न सके, म तिमीलाई भन्न सक्दिन कि तिनीहरू के थिए. भाषा अवरोध मात्र धेरै थियो. माछा फिर्ता छ थियो 10 ईन्च लम्बाई र म्याकिनासँग सम्बन्धित देखिन्थ्यो, तर भोदका उत्सव यो शुद्ध अटकल बनायो. रुसियामा फ्लाइ फिसि।
मार्शल आर्टको अभ्यास गरेर आफ्नो दिमाग र शरीरलाई सुदृढ पार्नुहोस्
मार्शल आर्ट मूलतः शारीरिक र मानसिक सीपहरूको एक सेट हो जुन बिस्तारै सिकाइन्छ, विकसित र एक ट्रेनर द्वारा पॉलिश सामान्यतया "सेन्सी" भनिन्छ’ जापानी कला र 'sifu को लागी’ क्यान्टोनिजमा. मार्शल आर्ट्स को "युद्ध को कला" को रूप मा अनुवाद, र तिनीहरूसँग हतियारविहीन लडाई प्रविधिको एक समूह हुन्छ, मुख्यतया आत्मरक्षामा केन्द्रित. प्राचीन बुद्धि र दर्शनमा आधारित, मार्शल आर्टले केवल दक्षको शरीरलाई मात्र मजबूत गर्दैन, तर तिनीहरू उसको दिमाग र आत्मालाई सुदृढ पार्छन्. पूर्वी संस्कृतिमा, आत्म नियन्त्रण, अनुशासन, धैर्य, जागरूकता, एक साँचो योद्धा को को रूप मा मानिन्छ, र मार्शल आर्ट प्राय: अभ्यास गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि यी सीपहरू विकास गर्नमा केन्द्रित छन्. प्राचीन समयमा, मार्शल आर्ट गोप्य राखिएको थियो र मौनतामा अभ्यास गरियो; यी सीपहरूमा सिकारु हुनु ठूलो सुअवसर थियो. यद्यपि, आज त्यहाँ बिभिन्न स्कूलहरू छन् जुन महान् प्राचीन मास्टरहरूको परम्परागत शिक्षा कायम राख्छन्. मार्शल आर्टहरू धेरै फरक शैलीहरूमा विभाजित छन्, सर्वव्यापी प्राच्य मानसिकता द्वारा एक साथ जोडिएको. यदि तपाईं मार्शल आर्टको अभ्यास गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईले एक शैली छनौट गर्नुपर्दछ जुन तपाईको आवश्यकता र सम्भाव्यतालाई उत्तम संतुष्ट गर्दछ. केही मार्शल आर्ट्स शारीरिक शक्ति मा अधिक ध्यान दिन्छ, जबकि अरूले टेकनीक र रिफ्लेक्समा फोकस गर्छन्. उपयुक्त शैली छनौट गर्नु अघि राम्रो गर्नु भनेको केहि प्रशिक्षण कक्षालाई सहयोग पुर्‍याउनु हो र ट्रेनरलाई सोध्नु हो कि तपाईं फिट हुनुहुन्छ कि छैन. अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जुन तपाईंले विचार गर्नुपर्दछ यो यो हो कि मार्शल आर्टलाई धेरै महत्वाकांक्षाको आवश्यकता पर्दछ, समर्पण, लगनशीलता र अभ्यास. तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ कि सीपहरू बिस्तारै सिक्दैछन्, र यसले उच्च ओहदा प्राप्त गर्न समय लिन्छ. जब तपाइँ शैली फेला पार्नुहुन्छ जुन तपाइँसँग उत्तम फिट हुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ट्रेनर योग्य छ र उसले सुलभ तरिकामा सिकाउँछ. चाहे अनुभवी वा श्रेणीको, सबै मार्शल आर्ट मास्टरहरूसँग पढाउन सक्ने क्षमता छैन! तपाईंले एक प्रशिक्षक खोज्नु पर्छ जुन सत्य 'कच्चा मोडल' को रूपमा खडा हुन्छ, एक व्यक्ति जसको शिक्षा उसको आदर्श र विश्वास संग मेल खान्छ. सही प्रशिक्षक र प्रशिक्षण जिम फेला पारेको छ, तपाईंलाई चाहिने सबै उपकरण हो. मार्शल आर्ट उपकरण कहिलेकाँही वैकल्पिक हुन्छ र यसले मुख्य रूपले वर्दी वा स्पियरिंग र सुरक्षात्मक उपकरणहरू समावेश गर्दछ जस्तै बक्सि glo ग्लोभ्स, टाउको गियर र छाती सुरक्षा. तपाईं या त यी परम्परागत वर्दी किन्न सक्नुहुन्छ, वा तिनीहरूलाई आफैं बनाउनुहोस्. तपाईंको प्रशिक्षकलाई परामर्श लिनुहोस् र उपयुक्त प्रशिक्षण पोशाकको सम्बन्धमा उसको आवश्यकताहरू फेला पार्नुहोस्. मार्शल आर्ट उपकरणले पनि एक बेल्ट समावेश गर्दछ. यो एक निश्चित कपडा सामग्री बाट बनेको हुन्छ र यसको उद्देश्य विद्यार्थीहरूको श्रेणीलाई छुट्याउनु हो. कालो बेल्टले उच्च स्तरको अनुभवलाई चिन्ह लगाउँछ र यो वर्षौंको अध्ययन र अभ्यासबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ. चाहे तपाइँ खेलको रूपमा वा आत्म-रक्षाको लागि मार्शल आर्ट अभ्यास गर्ने छनौट गर्नुहोस्, यसको फाइदा पर्याप्त छन्. मार्शल आर्टहरूले तपाईंको शारीरिक अवस्था सुधार गर्दछ, साथै तपाईंको एकाग्रता पनि, ध्यान र महत्वाकांक्षा. तिनीहरूले दिमाग र शरीरलाई पूर्ण रूपमा मजबूत गर्दछन् र तपाईंलाई आत्म-सम्मान प्राप्त गर्न मद्दत गर्छन्, आत्मविश्वास र सन्तुलन. मार्शल आर्टको अभ्यास गरेर आफ्नो दिमाग र शरीरलाई सुदृढ पार्नुहोस्
पैदल यात्राको लागि स्टिक्सहरू: धेरै सहयोगी उपकरणहरू!
पैदल यात्रा गर्न हिड्ने स्टिक प्रयोग गर्नु भनेको प्रकृतिको सौन्दर्यको आनन्द लिन र ठूलो व्यायाममा व्यायाम पाउनको लागि उत्तम तरिका हो।. पैदल यात्रा स्टिकहरू जो कोही पनि पैदल यात्रा को मजा लिन्छ को लागी एक महान सामान हो. उनीहरूले तपाईंलाई भूमिमा तपाईंको सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्दछ जुन असमान हो र जब तपाईं धारा र नदीहरू हुँदै जानुहुन्छ. जो कोहीले आफ्नो खुट्टा पैदल यात्रा गुमाएको छ, तपाईंलाई थाहा छ कति हिंड्ने लट्ठी हुन सक्छ. पैदल यात्राले तपाईंको खुट्टा र खुट्टामा टोल लिन सक्छ, विशेष गरी तिनीहरू जो उत्कृष्ट शारीरिक आकारमा छैनन् वा जससँग अन्य स्वास्थ्य मुद्दाहरूसँग संघर्ष गर्नुपर्दछ. घुँडा र पीठोको कम दुखाई भएका धेरै मानिसहरू हिड्ने छडी प्रयोग गरेर फेला पार्दछ तिनीहरूलाई फेरि पैदल यात्रा गर्न फिर्ता जान सक्षम गर्दछ. यदि आवश्यकताले प्रस्तुत गर्दछ भने एउटा हिड्ने स्टिक पनि एक महान आत्म रक्षा उपकरण हुन सक्छ. धेरै व्यक्तिहरू केवल एउटा हिड्ने स्टिक प्रयोग गर्दछन् तर केहि व्यक्तिहरू प्रत्येक हातमा एक भएको समर्थनलाई प्राथमिकता दिन्छन्. त्यहाँ छनौट गर्न धेरै भिन्न स्टिकहरू छन्. तपाईं खरीद गर्न अघि उनीहरूको जाँच गर्न चाहनुहुन्छ. सबैजनासँग शैली हुन्छ जुन उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकताको आधारमा रुचि दिन्छन्. म सजिलैसँग समात्नको लागि एउटा पट्टा सहित पैदल हिँड्ने सल्लाह दिन्छु. तपाईं पकड विचार गर्न पनि चाहानुहुन्छ, हिड्ने छडी को वजन, यदि यो विभिन्न लम्बाइमा समायोजित हुन्छ भने, र सेटअप र भण्डार गर्न कत्ति सजिलो छ. पैदल यात्राको लागि हिड्ने लाठीहरू खेलकुद सामान स्टोरहरू र अन्य धेरै फुटकर बिक्रीहरूमा खरीद गर्न सकिन्छ. जब तपाईं तिनीहरूलाई अनलाइन खरीद गर्न सक्नुहुनेछ यो गर्न गाह्रो छ किनकि तपाईं यो परीक्षण गर्न सक्नुहुन्न. मलाई लाग्दछ कि तपाईं जहिले पनि यसलाई फिर्ता पठाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाईं यससँग खुशी हुनुहुन्न भने. यो एक राम्रो विचार हो कि समीक्षा र खरीद जानकारी उपलब्ध विभिन्न हिडाई स्टिक्सहरू खरीद गर्नु अघि उपलब्ध छ. पैदल यात्राको लागि स्टिक्सहरू: धेरै सहयोगी उपकरणहरू!
डिक बटुकस : 1965 ड्राफ्ट डे पिक्सहरू
Dick Butkus डिसेम्बर मा जन्म भएको थियो 9, 1942 शिकागो मा, इलिनोइस, र व्यापक रूपमा सबै समयको महान फुटबल खेलाडी मध्ये एकको रूपमा परिचित छ. न केवल बटुकससँग सबै शारीरिक कौशल थियो जुन आफ्नो क्यारियरभरि एक शीर्ष खाल खेलाडी हुन, तर ऊ जहिले पनि चलाख हो. जब तपाईं यी दुई चीजहरू एकसाथ राख्नुहुन्छ तब यो सजिलैसँग बुझ्न सक्दछ कि किन बोटकस धेरै वर्षदेखि ग्रिडिरनमा एक शक्ति थियो. उच्च माध्यामिक स्कूल पछि बुटकसले इलिनोइस विश्वविद्यालयमा उसको खेल खेल्ने निर्णय गरे जहाँ उनी खेले 1962 लाई 1964. इलिनोइस बुटकसको समयमा उनी चाँडै नै एक गणनाका लागि बलको रूपमा चिनिन थाले. उसको लाइनब्याकर स्थितिबाट, बुटकस दुबैमा सर्वसम्मतिले सबै अमेरिकी चयन थिए 1963 र 1964. यो सम्मानको साथ जान उसले बिग टेन कन्फरेन्स मोस्ट मूल्यवान खेलाडी सहित अन्य धेरै पुरस्कारहरू जित्यो, र छैठौं स्थान Heisman ट्रफी मतदान मा समाप्त. मा 1983 बटुकसलाई कलेज फुटबल हल अफ फेममा सम्मिलित गरियो. थप रूपमा, डिक बटकस पुरस्कार हरेक वर्ष देशको सर्वश्रेष्ठ कलेज लाईनब्याकरलाई दिइन्छ. शिकागो बियर्सले बटुकसलाई एनएफएल ड्राफ्टको पहिलो राउन्डमा मस्यौदा बनायो. सुरुदेखि उनले सम्पूर्ण लीग देखाउँछन् किन उनी कलेजमा सर्वश्रेष्ठ लाइनब्याकर हुन्. आफ्नो धोकेबाज अभियानको दौडान उनले भालुहरूलाई टक्सल्समा नेतृत्व गरे, जबरजस्ती fumbles, र अवरोधहरू. उनको क्यारियरको क्रममा बुटकसलाई नौ प्रो बाउल्समा चयन गरिएको थियो, र छ ली अवसरहरूमा सबै लीग टीम बनायो. समग्रमा, डिक बटकस जहिले पनि फुटबलको खेल खेल्न सबै भन्दा राम्रो लाइनब्याकरको रूपमा चिनिन्छ. उसको हड्डी कुचल हिट र जीतको लागि ईच्छा सधैं भालु प्रशंसकहरू द्वारा सम्झिन्छ, साथसाथै कसैलाई पनि जसले मैदानमा हेर्ने सुअवसर पायो. डिक बटुकस : 1965 ड्राफ्ट डे पिक्सहरू
कस्तो महान रात
टाइम मेसिनले मलाई चान्सलर एवेन्यूमा फिर्ता ल्याउँदछ, नेवार्क, नयाँ जर्सी, सर्का 1964. भिन्टेज कारहरू जस्तै ’२ ओल्डस्मोबाइल स्पिटफायर, 1957 र 1958 चेन्नी बन्नी हप हुँदै सडकबाट तल ओर्लेर आए, बुर्गेरामा र डेभको हट डग हेभन. के हामीले केवल फ्रेन्च फ्राइहरू खायौं?, तातो कुकुर र ह्यामबर्गर? मलाई त्यस्तै लाग्छ. मे १, 2005 मलाई आइतवार बिहानको केटाहरूको समूहमा उपस्थित हुन मनलाग्दो कुरा थियो जुन अक्सर चान्सलर एभिन्यूमा प्रयोग हुने गर्थ्यो. यो घटनाले हामी केटाहरूको माझमा अस्तित्वमा रहेको क्यामेराडेरीलाई स्थायी बनाउँछ. केही पुराना केटाहरूको लागि टाइम मेशिन 1920 को फिर्तामा गयो. त्यहाँ केही केटाहरू थिए जो त्यहाँ थिए 90 वर्ष पूरानो. मलाई ठूलो लाग्यो. म भाग लिने कान्छी केटामध्ये एक हो. वाह कस्तो समूह. त्यहाँ सकिएको हुनुपर्छ 200 त्यहाँ चान्सलरका केटाहरू. हामी सबै छिमेकमा ह्या to्ग थियौं. हामी मध्ये अधिकांश Weequahic हाई स्कूल गए. केही दक्षिण साइड हाई स्कूल गए, र केटाहरू हिलसाइडका थिए. र हामी मध्ये अधिकांश बेसबल खेल्थ्यौं, बास्केटबल, सफ्टबल, वा हाम्रो समयमा फुटबल. साँझको रमाइलोपनले एउटा ठूलो कोठा सिर्जना गर्‍यो. म कहिलेकाँही सोच्न सक्दिन. मैले आफूलाई झुकिरहेको र उनीहरूको कुरा सुन्न को लागी कसैको मुख नजिकै मेरो कान राखेको भेटें. मैले यो धेरै चलिरहेको देखे. हो त्यहाँ धेरै मुख थियो. कुन चीजले मलाई साँझको लागि विशेष बनायो भनेर मेरा पुराना साथीहरूलाई हेरिरहेको थियो जुन मैले धेरै समयमा देखेको थिएन. केहि केसहरूमा 20 बर्ष. श्री बारोन जस्ता केही महान मान्छेहरू अँध्यारो गर्न सक्षम हुनु, स्टेनली लेवी, बिग जेफ Schulman, जो मार्गुलिज. स्यान्डी मार्कोविट्ज र जेक डेभिसले साँझलाई राम्रो रात बनाए. म साथ थिए विशेष मान्छे को कारण मलाई विशेष लाग्यो. यो एकदम राम्रो रात थियो. यो लेख पढ्न रमाईलो लाग्छ कसैलाई पनि यो लेख पार गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्. कस्तो महान रात
एस्क्रिमा – फिलिपिनो मार्शल आर्ट
एस्क्रिमा एक लोकप्रिय फिलिपिनो मार्शल आर्ट हो जुन १00०० को पछि लागी हो, स्पेनिशले फिलिपिन्स टापुहरूको उपनिवेशको समयमा. एस्क्रिमा एक धेरै सरलीकृत तर व्यावहारिक रूप हो लडाई प्रविधिको मूलतः एक आत्म-रक्षा उपकरण को रूप मा डिजाइन. एस्क्रिमा धेरै अन्य नामहरू जस्तै Eskrima द्वारा पनि चिनिन्छ, अर्निस, अर्निस डि मनो, काली र एफएमए (फिलिपिनो मार्शल आर्ट). यसको प्रभावकारिताको कारण, नेस्भी सिलहरू र आर्मी स्पेशल फोर्स सहित धेरै विशेष फोर्सहरूमा पनि एस्क्रिमा व्यापक रूपमा पढाइन्छ. संक्षिप्त इतिहास: धेरैले विश्वास गर्छन् कि एस्क्रिमा वा फिलिपिनो मार्शल आर्टको उत्पत्ति चिनियाँबाट प्रभावित कुण्ड ताओ जस्ता इन्डोनेसियाका लड़ाई रणनीतिबाट भएको हो, चुआन फा र ताई ची डबल स्टिक फारमहरू. अरूहरू विश्वास गर्छन् कि एस्क्रिमा कला फाराम पूर्ण रूपमा फिलिपिन्सका मानिसहरूले विकसित गरेको हो. यद्यपि, सबै भन्दा प्रशंसनीय विवरण स्प्यानिश उपनिवेशको इतिहासमा जड भएको देखिन्छ. जब स्पेनिशले फिलिपिन्स टापु ओगटे, एस्क्रिमा जस्तो कलाको फार्म पहिले नै अवस्थित भएको थियो तर मनोरञ्जन मात्र थियो. यद्यपि, स्पेनले बोलो जस्ता स्वदेशी फिलिपिन्स हतियारहरू प्रतिबन्ध लगाएको खण्डमा यो कला अझ मार्शल अनुशासनको रूपमा विकास हुन थाल्यो (machete), १ag०० को खोर्स र लडाई स्टिकहरू. अमेरिकीहरूले हस्तक्षेप नगरेसम्म यो एउटा गोप्य कला नै रह्यो 1898. त्यस पछि, फिलिपिनो मार्शल आर्टले मान्यता र लोकप्रियता पाउन शुरू गर्यो. पश्चिममा, फिलिपिनो आप्रवासीहरूद्वारा दोस्रो विश्वयुद्ध पछि एस्क्रिमा परिचय र लोकप्रिय भएको थियो, विशेष गरी हवाई राज्य र क्यालिफोर्नियाको अमेरिकी राज्यहरूमा. हतियार र एस्क्रिमा मा फुटवर्क: मार्शल आर्टका अन्य प्रकारहरू जस्तो, Escrima को आधारभूत अवधारणा सिक्नको प्राथमिक उपकरण हतियारमा केन्द्रित छ, जो खाली हात तकनीकहरू द्वारा अनुसरण गरिएको छ. रट्टन स्टिक एस्क्रिमा प्रशिक्षणमा प्रयोग हुने सबैभन्दा सामान्य हतियार हो, जो sparring जब हात र टाउको सुरक्षा समावेश गर्दछ. अन्य हतियारहरूमा जलाइएको र कठोर काठको बनाइएको दाउरा समावेश छ, जस्तै मोलाभ वा कामगोंग (आबनूस). आधुनिक संस्करणहरू एल्युमिनियमबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ, अन्य धातुहरू, वा उच्च प्रभाव प्लास्टिक. नुन्चकू (कुंग फू स्टिकहरू वा डबल स्टिक्स पनि भनेर चिनिन्छ) हथियार अभिनेता ब्रुस ली द्वारा लोकप्रिय गरिएको थियो, Escrima को एक उत्साही व्यवसायी. प्रत्येक दायरा – विपक्षी बीचको दूरी – एस्क्रिमामा यसको आफ्नै विशेषताहरू र फुटवर्क प्रविधिहरू छन्. राम्रो फुटवर्कले यी दायराहरूको दक्ष नियन्त्रणलाई सक्षम गर्दछ. फूटवर्क त्रिकोणको हिसाबले प्रदर्शन गरिएको छ दुई खुट्टा त्रिकोणको दुई कुनामा कब्जा गर्दछ र तेस्रो कुनाको चरण. त्रिकोणको आकार र आकार विशेष अवस्थामा निर्भर हुन्छ. Escrima तथ्यहरु: 1. Escrima हार्डको मिश्रण हो (कराटे जस्तै) र नरम (टाई ची चींग) शैलीहरू. 2. वर्गीकरणको आवश्यकता बिना नै एस्क्रिमा आदर्श सडक-फाइटिंग सेटिंग्समा सिकाइएको छ. 3. संयन्त्र प्रविधिको केन्द्रित नभई आपत्तिजनकमा केन्द्रित छ, लडाई शैली. 4. प्रशिक्षकहरूको वरिष्ठतालाई मान्यता दिनको लागि बाहेक एस्क्रिमामा कुनै आधिकारिक स्तर छैन. 5. एस्क्रिमामा अधिकांशतः शक्ति शरीरको आन्दोलन र गतिको अर्थव्यवस्थाबाट आएको हो, बरु शक्ति भन्दा. 6. एस्क्रिमा एक पूर्ण मार्शल आर्ट हो, हतियार र खाली हात प्रविधिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै. 7. एस्क्रिमाले बहु विपक्षीको बिरूद्ध स्पिरि inमा प्रभावकारी प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ. एस्क्रिमा – फिलिपिनो मार्शल आर्ट
वर्ग / खेल समाचार शीर्षकहरू
कुनै कोटी छैन
Gvmg – ग्लोबल भाइरल मार्केटिंग समूह
। प्रतिलिपि अधिकार 2020 खेल समाचार हेडलाइन्स ग्लोबल लेख WebSite.WS